2020 ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
အသစ်စက်စက်Dramaကားလေးပါ။မင်းသားကြီး Andy Garciaနဲ့ဆယ်ကျော်သက်စတားလေးDafne Keen (Loganကားမှ X23 ဒီကားမှာလည်းအကြောတင်းလေး)တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ သဘာဝဘေးကြောင့် စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်နေတဲ့ပရီတိုရီကိုမြို့မှာကားဝယ်ရောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရာဖာဆိုတဲ့တစ်ကိုယ်တည်းနေထိုင်သူယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်စီးပွားရေးမပြေလည်ပဲ ဆပ်စရာအကြွေးတွေတစ်ပုံကြီးပါ။သူ့အတွက်သူတောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှေ့က11နှစ်သမီးလေး အန်နာရဲ့အမေထောင်ခဏကျသွားတဲ့အခါအန်နာကို သူ့ဖခင်ဆီပို့ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရပါတော့တယ်။ရာဖာကလည်း အုပ်ထိန်းသူမဲ့နေတဲ့အန်နာ့ကိုစောင့်ရှောက်၊လူလည်မလေးအန်နာကလည်းအကြွေးတွေရက်ပိုင်းအတွင်းဆပ်ရမယ့်ရာဖာအတွက်ပိုက်ဆံရမယ့်နည်းတွေကြံပေးပုံတွေကို ကြည့်ရှုရမှာပါ။ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ။
Jasmine ဆိုတဲ့ ရှေ့နေမကလေးဟာ အမှုတွေကို အပေးအယူလုပ်ပြီးပဲ ဖြေရှင်းတတ်ပြီး တရားခွင်တစ်ခါမှ မဝင်ဖူးပါဘူးတစ်နေ့မှာ အထက်အရာရှိမှ သူ့ကို အပေးအယူလုပ်ရန် အမှုတစ်ခုပေးပါတယ်အဲဒီအမှုမှာ Grace ဆိုတဲ့ မိန်းမဟာ ယောက်ျားကို သတ်မှုအတွက် စွတ်စွဲခံထားရတာပါထူးခြားတာက Grace က အပြစ်ကို ဝန်ခံချင်ပါတယ် ဒီတော့ သူလုပ်ရမှာက အပေးအယူစာချုပ်မှာက လက်မှတ်ထိုးရုံပါပဲအမြဲတမ်း အမှုတွေကို အပေးအယူလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ Jasmine ဟာ ဒီအမှုမှာတော့ တစ်ခုခုလွဲနေပြီဆိုတာ ခံစားမိပြီလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Grace ကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့…
Ip Man4The Finale 2020
IP Man ရဲ့4ကားမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်သလို နောက်ဆုံးကားလည်းဖြစ်ပါတယ်
IP Man ဟာ သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသေဆုံးပြီးတဲ့နောက်
သားဖြစ်သူကလည်း အဖေဗီဇအတိုင်းပဲ သိုင်းကိုအရူးအမူးဝါသနာပါပေမယ့်
IP Man က မသင်ပေးခဲ့ပါဘူး..ဒီတော့ရန်တွေခဏခဏဖြစ်ကျောင်းထွက်ရတော့
သားဖြစ်သူအတွက် သင့်တော်မယ့်ကျောင်းကို ရှာဖို့အတွက်
IP Man တစ်ယောက် အမေရိနိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ်စကို မြို့ကိုခရီးဆန့်ရပါတော့တယ်
အဲ့မှာ သူ့တပည့်ရင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Bruce Lee နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါတယ်
ဒီကားမှာ Bruce Lee ကို ရိုက်ကူးထားတာလည်း ကျွန်တော်သဘောကျမိပါတယ်
To All the Boys: PS I Still Love You 2020
အခု မိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ 2018 က ထွက်ခဲ့တဲ့ To All the Boys I’ve Loved Before ဆိုတဲ့ အမေရိကန်အချစ်ဇာတ်ကားလေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့
2020 မှာ ထပ်မံရိုက်ကူး ထုတ်လွှတ်လာတဲ့ To All the Boys: P.S. I Still Love You ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ
ပထမကားမှာတုန်းကလိုပဲ လူငယ်ကြိုက် အချစ်ကားလေးဟာ ပရိသတ်ကို စိတ်မပျက်ရမယ့် ကြည်နူးစရာ အချစ်ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေနဲ့ ထပ်မံ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်
လာရာဂျင်းနဲ့ ပီတာကတ်ဗင်စကီနဲ့ ပထမဆုံးဒိတ်လေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို စတင်ထားပြီး ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာ ချစ်သူဘဝလေးကို ပုံဖော်ပြထားပါတယ်
အဲလိုအချိန်မှာပဲ လာရာဂျင်းရဲ့ နောက်ထပ် ရည်းစားစောင်တစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ အလယ်တန်းတုန်းက ဂျွန်အမ်ဘရို့စ်ဆီက ပြန်စာတစ်စောင်
လက်ခံရရှိလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ….
ဂျွန်အမ်ဘရို့စ်ဟာ လာရာဂျင်းနဲ့အတူ နွေရာသီလုပ်အားပေးစခန်းမှာပါ အတူရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ လာရာဂျင်းတစ်ယောက်
၃ ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဘယ်လိုတွေ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာလဲ
ပီတာနဲ့ ဂျွန် ၂ ယောက်ကြား ဘယ်လို‌တွေ ရွေးချယ် အဆုံးသတ်သွားမှာလဲဆိုတာကိုတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်
အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ May Tharaphi Lwin ပဲဖြစ်ပါတယ်….
သမ္မာကျမ်းစာအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နတ်ဆိုးတွေရှိပါတယ်… ဂတ်ဘရီရယ် မိုက်ကယ် တိုင်နဲ့ ဟန်နာတို့ဟာ နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်တဲ့ မုဆိုးတွေပါ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ အဲ့မုဆိုးအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အသီးသီး သူ့အလုပ်နဲ့သူ ဖြစ်နေကြပါပြီ….တစ်နေ့မှာတော့ သမ္မာကျမ်းစာထဲကအတိုင်း ကမ္ဘာပျက်ကပ်ကိုသယ်ဆောင်လာမယ့် နတ်ဆိုးတမာန်တော်လေးယောက် ရောက်နေပြီမှန်း သိလိုက်ရတဲ့အခါ…သူတို့တွေပြန်ပေါင်းစည်းပြီး ကမ္ဘာကိုကယ်တင်နိုင်မှာလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဇာတ်ကားလေးက 2020 ဇန်နဝါရီလကပဲ ရိုက်ကူးပြီးစီးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး IMDB ကတော့ 10 out of 6.3 ရထားပါတယ်။ Runningman ကြည့်တဲ့သူတွေဆို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်က ဇာတ်ကား promotion အတွက်ဒီဇာတ်ကောင်တွေ လာသွားတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဂန်းထယ်ဆူက ရှေ့နေအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ JH မှာတရားဝင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ အမြဲအိမ်မက်နေခဲ့သူပါ။တစ်နေ့တော့သူ့အတွက် တရားဝင်ဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကလည်း ကျရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ အကြွေးနဲ့သိမ်းခံရတော့မယ့် နိုင်ငံခြားက ဝယ်ယူထားတဲ့တိရိစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုကို ဦးစီးပေးဖို့ကုမ္ပဏီကခိုင်းစေလာပါတယ်။ကြည့်ရင်တော့လွယ်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ထူးခြားတာက အဲ့တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ ပြစားလို့ရတဲ့ တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်မှမရှိတာပါပဲ။ကျန်တဲ့ အသေးအမွှားတိရိစ္ဆာန်လေးတွေပဲ ကျန်ခဲ့ပြီး တခြား တန်ဖိုးကြီးတိရိစ္ဆာန်တွေကအကြွေးကြောင့် ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့ အခြေအနေပါ။အဲ့ဒီလို ပြစားစရာတိရိစ္ဆာန်တောင်မရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံကြီးကို ဂန်းထယ်ဆူကို ၃လအတွင်းဦးစီးပြီး အကြွေး သိန်းတစ်သောင်းကို JH ကဆပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ဂန်းထယ်ဆူတစ်ယောက် တိရိစ္ဆာန်တွေမရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုံကိုဦးစီးပြီး အကြွေးဆပ်ဖို့ရှိသမျှအကြံထုတ်ရပါတော့ပါတယ်။ဂန်းထယ်ဆူတစ်ယောက် တိရိစ္ဆာန်ရုံကြီးကို ဘယ်လိုလည်ပတ်အောင်လုပ်မလဲ။အကြွေး ဘယ်လိုဆပ်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး အဖြေရှာကြည့်စေချင်ပါတယ်။။ပိတ်ရက်မှာဒီကားလေးနဲ့ ရယ်မောပြီးအနားယူခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Moe Pwint ပဲဖြစ်ပါတယ်…..
အာဒိသယာဆိုတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဟာသမီးဖြစ်သူ ဗာလီနဲ့အတူ မွန်ဘိုင်းမြို့ကို ရဲမင်းကြီး(ရဲမှူးကြီးဟု သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ထားသည်)အဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ ဆိုးသွမ်းသူတွေကို လိုက်လံနှိမ်နင်းရာကနေ ဇာတ်လမ်းကို စထားပြီး….ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တမီးလ်ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းအကအလှတွေ ၊ ဟာသခန်းလေးတွေ ညှပ်ထည့်ပြီးဇာတ်လမ်းကို အရှိန်တက်လာအောင် စွမ်းဆောင်ထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းပုံစံက ရဲနဲ့လူဆိုး အားပြိုင်ကြတဲ့ မြင်နေကျ သာမာန်ဆိုပေမယ့်ရိုက်ကူးထားပုံက ဆန်းသစ်ပြီး Rajinikanthရဲ့ ဟိုးရုပ်ရှင်ခေတ်ဦးကတည်းကသုံးစွဲလာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ တီးလုံးကို အက်ရှင်ခန်းတွေ ၊ Tempo မြှင့်တင်တဲ့အခန်းတွေမှာသင့်တော်သလို သုံးစွဲထားပုံက သပ်ရပ်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို တစ်မျိုးတစ်မည် ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ကဲ…အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဇာတ်ကားပရိတ်သတ်တို့ရေ…ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းက စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့Idol ကြီးရဲ့ အသစ်စက်စက် ရုံတင်ဇာတ်ကားကြီးကို လက်မနှေးပဲ အားပေးလိုက်ကြပါစို့။
ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစကတော့ ဖင့်ချ်ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ တစ်မနက်မှာ တံတားပေါ်ပြေးနေတုန်းတံတားဘောင်ပေါ်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး တံတားအောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ် … ကောင်မလေးက သူတို့အတန်းထဲက ဗိုင််အိုလက် ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ …ဖင့်ချ်ဟာ ဗိုင်အိုလက် တံတားအောက် ခုန်ချမယ်အထင်ကြောင့်လားမသိ …အာရုံလွှဲဖို့ သူပါ တံတားဘောင်ပေါ် တက်လာခဲ့တယ်…သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အစမှာ ယဉ်သကို ဆိုသလို ဗိုင်အိုလက်က ဖင့်ချ်ကို မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ် …တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဖြုရောင်က တကယ်ပဲဖြူသလား အမည်းရောင်က တကယ်ပဲမည်းသလား …ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအမှောင်ဖက်ခြမ်းတွေရှိသလဲ …အမှောင်ထဲကလူတစ်ယောက်ဟာ အလင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သလားဒါတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပါပဲ …ရိုးရှင်းသော်လည်း မြင်ရခက််တဲ့ အလင်းရောင်တွေကို ဟောဒီ့ဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရှုကြရအောင်
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဂျဂ္ဂီဆိုတဲ့ပန်ဂျာဗီလူငယ်တစ်ယောက်ဆီမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ သူတို့မျိုးရိုးအမွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်ဂျာဗီအက, ဘန်ဂရားကို လူသိကျော်ကြားစေချင်တာပါပဲသူ့အဖေ သူ့အဖိုးတို့ကို ဘယ်သူမှမသိခဲ့တာကြောင့် ဒီအကနဲ့ တကမ္ဘာလုံးကိုသိစေချင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ ရှေ့ထွက်မိန်းကလေးအက,သမားမရှိတာပါပဲသူ့ကောလိပ်တစ်ခုလုံးမှာလည်း စိတ်တိုင်းကျတစ်ယောက်မှမတွေ့ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာ အက,တော်သော စီမီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အက,တော်တဲ့ဒီကောင်မလေးကို သူ့အသင်းမှာပါဖို့ စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ ဒီကောင်မလေးဟာ သူ့ပြိုင်ဘက်ကောလိပ်ကဖြစ်နေပါတော့တယ်မြင်မြင်ချင်းသဘောကျမိတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူ့အိပ်မက်ထိပ်တိုက်တွေ့လာလေသောအခါမှာတော့ …
ဂျီဟူဆိုတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားလေးက မိဘတွေမရှိတော့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အစ်မရဲ့အုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းနခဲ့ရလို့ နည်းနည်းဇွတ်တရွတ်နိုင်တဲ့ အပြင် ကျောင်းကရန်ဖြစ်ပွဲတိုင်းလည်း သူကထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျောင်းအုပ်ကသည်းမခံနိုင်လို့ သူကို ကျောင်းသားဆိုးတွေစုဝေးရာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ကျောင်းကလူငယ်ပြုပြင်ရေးစခန်းလိုနေရာမျိုးပေါ့။ဒယ်ဟုန်းအထက်တန်းကျောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့မှာအဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေစုဝေးရာ ထောင်ပုံစံကျောင်းတစ်ကျောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်။အဲ့ကိုဂျီဟူရောက်သွားချိန်မှာတော့ အဲ့ဒီကကျောင်းသားတွေက ထင်ထားသလိုပရမ်းပဒါရန်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစည်းကမ်းနဲ့လက်ဝှေ့ကလပ်ထောင်ပြီး မကျေနပ်တဲ့သူကို တရားဝင်လောင်းကြေးနဲ့ ချိန်းထိုးကြတယ်။အဲ့မှာအနိုင်ရတဲ့သူကတော့ပြောရရင်ဆရာကြီးပေါ့။ဘယ်သူမှမထိရဲတော့ဖူး။အဲ့မှာဂျီဟူအနိုင်ယူရမယ့်လူသုံးယောက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ ဘတ်ဂီထယ် နပန်းသမားလက်ရွေးစင်ဟောင်း ချိန်းထိုးသမျှကျောင်းသားတိုင်းကို အရိုးကွဲအောင်ဆော်တဲ့သူ။နံပါတ် ၂ Hot Dog ခွေးရူးလို့သိထားကြတယ်။ရန်ဖြစ်လို့အရူးစိတ်ပေါက်လာရင်မဲမဲမြင်သမျှမလွတ်တမ်းထိုးတတ်လို့။နံပါတ်၃ ကျောင်းမှာအတော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူ ရုပ်လေးချောပေမယ့် အတိုက်အခိုက်မှာတော်တယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂွန်းချန်းရှစ်။အဲ့လိုသုံးယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမယ့်အဲ့လက်ဝှေ့ကလပ်ကရာဇဝင်ရှိတယ်။ဒီသုံးယောက်မတိုင်ခင် အရမ်းကြမ်းအရမ်းဂေါ်တဲ့ ဘဲကြီးတပွေရှိခဲ့တယ်။နာမည်ကကျားကြီးခေါ် ဂျောင်းထယ်ဟိုတဲ့။သူမရှိတော့မှကျောင်းလက်ရွေးစင်အတော်ဆုံးတွေကိုရွေးဖို့ လက်ဝှေ့ကလပ်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာ။သူကမတော်တမှုတစ်ခုကြောင့် ကျောင်းသားလူမိုက်လောက ခေတ္တခနပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်။သူထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း လက်ဝှေ့ကလပ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ဂျီဟူကတော့အဲ့ကျောင်းမှာရေရှည်အဆင်ပြေပါ့မလား။ကျားကြီးကကောဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ထိပ်တန်းသုံးယောက်ကိုကော ဂျီဟူတစ်ယောက် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့
အရင်လက ရုံတင်သွားတဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ကားလေးပါ။အခြားဂြိုလ်ကနေလာပြီး အမြန်နှုန်းနဲ့ပါဝါတွေရှိတဲ့ ဆောနစ်ဆိုတဲ့ ဖြူကောင်လေးဟာရန်သူတွေလက်ကနေ ပြေးရင် ကမ္ဘာပေါ်ကို ရောက်လာပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရဲတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ကို ဖမ်းဖို့လိုက်လာတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် ရိုဘော့နစ် နဲ့ပါ ရင်ဆိုင်လာရပါတော့တယ်။ဒီတော့ ရဲအရာရှိ သောမက် နဲ့ဆောနစ်တို့ သူ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးရင် ဘေကင်းတဲ့ဂြိုလ်တစ်ခုကို ဆောနစ်ကို ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ ြကိုးစားရပါတော့တယ်။ဆာနစ်အဖြစ် ဘန် ရှဝက်က သရုပ်ဆောင်ထားပြီးဗီလိန်နေရာကတော့ မတွေ့ရတော ကြာပြီဖြစ်တယ်မင်းသားကြိး ဂျင်မ် ကာရေးမို့ ကြည့်လို့သိပ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်ကားက နာဇီတွေ လက်ထဲကျရောက်နေခဲ့တဲ့ ဂျူးကလေးငယ်တွေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဘဝသစ်ပြန်စနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဝင်ဒါမီယာကန်နားက ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စခန်းတစ်ခုအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အနိဌာရုံတွေ ကြားမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ သူတို့လေးတွေ ပုံမှန်လောကကြီးထဲမှာ ဝင်ဆံ့နိုင်အောင်လေးလအတွင်းမှာ ဘယ်လိုတွေကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စစ်ပွဲရဲ့ ရိုက်ပုတ်မှုဒဏ်တွေကို သူများတွေထက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ သူတို့ကို စာနာနားလည်လာနိုင်ပြီး သူတို့ကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ သူတွေရဲ့ စေတနာကိုလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာပါ။
Timmy Failureဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူမြို့ရဲ့အတော်ဆုံးစုံထောက်လို့ယူဆနေတဲ့ ၁၁နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ…. ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအိမ်ကထွက်သွားလို့ အမေဖြစ်သူကအလုပ်တွေအရမ်းလုပ်ပြီးတော့ သားဖြစ်သူကိုအလိုလိုက်ခံထားရတဲ ကလေးတစ်ယောက်ပေါ့…. သူ့စိတ်ကူးထဲကTotalလို့အမည်ရတဲ့ပေါင်၁၂၀၀လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ ပိုလာဝက်ဝံကြီးနဲ့ Total Failureဆိုတဲ့ စုံထောက်အေဂျင်စီတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားပါတယ်….. ကျောင်းစာကိုစိတ်မဝင်စားပဲ စုံထောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲ စိတ်ထဲရှိနေတဲ့ တင်မီတစ်ယောက်အတွက်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ရတာ အခက်အခဲတွေများလှပါတယ်….. သူစိတ်တိုင်းကျ အမှုတွေလိုက်ရင်းနဲ့ လောကကြီးအကြောင်း လူတွေအကြောင်း ဘယ်လိုသိမြင်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…. ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဘာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲကျရှုံးကျရှုံး ကိုယ်ချစ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် အတိုက်အခိုက်တွေကြားထဲကနေ ကြိုးစားပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့ သင်ခန်းစာပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်
ဇာတ်လမ်းက အက်ဆစ်နဲ့အပက်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုပြန်လည်တည်​ဆောက်ယူသလဲသူ့လိုမျိုး နောက်ထပ်အတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကို တက်ပြီး “အက်ဆစ်ရောင်းချမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်”ဖို့ အယူခံဝင် ၊ အဆိုပြုလွှာတင်ကာ. . .နောက်ဆုံး ဥပဒေပြစ်ဒါဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့အထိ ကြိုးစားပုံကို ရိုးရိုးလေး ရိုက်ပြထားတာပါပဲ။ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်ကို မက်ဆေ့ပေးချင်တဲ့ အချက်တွေကို ဇာတ်ကားအစမှာရော အဆုံးမှာပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ရင်ဖိုစရာ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေထက်ကို ဆင်ခြင်စရာတွေ ၊ ပြင်ဆင်စရာတွေကို မြင်မိစေပါလိမ့်မယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ဖို့အတွက် မင်းသားရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ သုံးမထားပဲ မင်းသမီး Deepika Padukone တစ်ယောက်သာ သုံးထားတာမို့ ၊ ဘတ်ဂျက်လည်း အင်မတန်နည်းပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့ တင်ပြချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယပြည်နယ်လေးခုမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ပြသခွင့်ရခဲ့သလို ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကြားမှာလည်း အပြုသဘော ဝေဖန်ချက်တွေ ရခဲ့ပါတယ်။
Tootsies and The Fake 2020
ဇာတ်လမ်းအစကတည်းက မွှေလိုက်တာ . ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ ပါးစပ်မပိတ်ရအောင်ခွီနေရတဲ့ ထိုင်းကား အလန်းစားလေးပါ။ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ပေါက်ကရတွေဆိုတာ မနည်းဘူးရယ်သူတို့ကြောင့် မင်းသမီးတစ်ယောက် မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကို သူတို့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရပါတော့တယ်။ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?????အယောင်ဆောင် ဆိုတာက ဘယ်လို ပေါ်လာတာလဲ? ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ထိုင်းတွေရဲ့ မျက်နှာကိုပြုပြင်တဲ့ စကေးတွေကိုပါ ထည့်ပြသွားတာ ခွီနေရပါတယ်။တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ပေါကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။အခွီကား ဆိုပေမယ့် မက်ဆေ့ဂျ်တွေကလည်း ပေးသွားပါသေးတယ်။ပြောရင် စပွိုင်း ဖြစ်မှာစိုးလို့ တသောသောနဲ့ ရယ်မောရင်း ဒရာမာအချိုးအကွေ့လေးတွေကိုလည်း ခံ့စားလိုက်ကြပါစို့။
တောင်အာဖရိကမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကို ထောင်ဒဏ်အသီးသီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့အချုပ်ကျတဲ့လူတွေကိုစည်းရုံးပြီးထွက်ပြေးဖို့အကြံအစည်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြတယ်ဘက်စုံထောင့်စုံကစောင့်ကြည့်နေပြီးသံတံခါးအထပ်ထပ်နဲ့ထောင်ကနေ သစ်သားနဲ့သော့တူလုပ်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကတော့
ဇာတ်လမ်းမှာ ဘော်စတွန်မြို့ရဲ့ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Spenser ဟာ အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ သူ့အထက်အရာရှိကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ငါးနှစ်နေခဲ့ရတယ်။Spenser က ထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘော်စတွန်မြို့ကနေထွက်သွားပြီးထရပ်ကားမောင်းသူအဖြစ် ဘဝအသစ်ပြန်စတော့မှာပါ။ဒါပေမယ့် သူ ထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့ နောက်နေ့မှာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုကို တွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့Spenser တစ်ယောက် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်
အသက်9နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ကလေးမလေး။ငယ်စဉ်က စိတ်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အတွက် ပြဿနာကလေးလေး တယောက်ဖြစ်လာပြီးသူ့အမေက ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆီကို ပို့ထားတယ်။ကလေးဆိုးမှ ကလေးဆိုးလေး အစစ်။ ဆဲတယ် စကားနားမထောင်ဘူး။နောက် သူ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို ဆွသလိုဖြစ်ပေးတဲ့တခုကို လုပ်လိုက်မိရင်ကြောက်လန့်ဒေါသထွက်ပြီး ဗြောင်းဆန်သွားတတ်တယ်။ကလေးဂေဟာတွေ အများကြီးကနေ ငြင်းပယ်ခံရတယ်။အဲဒီကလေးမလေးကို ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးကလူတွေ အထူးသဖြင့် သူ့ကို ဂေဟာလိုက်ရှာပေးရတဲ့အမျိုးသမီးရယ်။သူတို့ဆီမှာ ရှိတတ်တဲ့ School Escort လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းအကြိုအပို့လုပ်ပေးရတဲ့ အစောင့်ရယ်သူ့မွေးစားအမေတယောက်ရယ် ပူးပေါင်းပြီး ကူညီဖို့ ကြိုးစားကြပုံတွေအကြောင်းပါပဲ။ဇာတ်လမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပေမယ့် ကလေးတယောက်ရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ။သူတို့ကို အလိုရှိစေချင်တဲ့သူက သူတို့ကို မလိုချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိ ရိုက်ခတ်မှုပြင်းထန်တာတွေ။ကလေးငယ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေက ဘဝတလျှောက်ဘယ်လောက်ထိ လွှမ်းမိုးနိုင်တာတွေ သေချာကို ရိုက်ပြထားနိုင်လို့ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးတကား။
၂၀၂၀ ထွက် crime ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးပါ။ လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ အဆင်မပြေတဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်လေးဘရောင်းလီ ဟာဆိုရင် ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ဟိုတယ်ကလူတွေကလည်းသူ့ရောဂါကိုနားလည်ပေးပါတယ်။ ဘရောင်းလီဟာ သူ့ရောဂါကို သက်သာကောင်းမွန်တိုးတက်လာဖို့အတွက်လူတွေကိုကြည့်ပြီးသင်ယူပါတယ်။ သူ့ရဲ့သင်ယူပုံကနည်းနည်းတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်စေမယ်ထင်တယ်။ဟိုတယ်ကအခန်းတွေမှာ စီစီတီဗွီတပ်ပြီး ဟိုတယ်မှာနေခဲ့လူတွေရဲ့ အပြုအမှု အနေအထိုင်ကို ကြည့်ပြီးသင်ယူတာပါ။ ဒီအထိက ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမဟုတ်သေး . တကယ့်စိတ်ဝင်စားစရာက အဲ့နောက်ပိုင်းကနေစတော့တာပါပဲ ။ ဟိုတယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြီးအကျယ်သော ကိစ္စတစ်ခု . အဲ့ကိစ္စကိုတော့ မူဗီထဲမှာကြည့်ပါ။မင်းသားကိုလည်း သိကြမယ်ထင်ပါတယ် Tye Sheridan ပါ သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်မှုတွေကတော့ ပိရိသေသပ်ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာမို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါ
Death Cab 2020
၂၀၂၀ အစောပိုင်းမှာ ကိုရီးယားမှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့Thriller အမျိုးအစားကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ညဖက်တွေဆိုတက္ကစီသမားတစ်ယောက်က ခရီးသည်တွေကို ၃၁ လမ်းဆိုတဲ့နေရာကို ခေါ်သွားပြီးပြန်ပေးဆွဲပြီးသတ်ပစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေက ဂျီဟုန်းအထက်တန်းကျောင်းလေးမှာပျံ့နေပါတယ်။အဲ့ကျောင်းမှာလျှို့ဝှက်သည်းဖိုတွေဆို စုံစမ်းချင်တတ်ကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက် Youtuber အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ယောင်းဂျောင်း၊ဂျင်းဂီနဲ့ လီဆွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေး၂ယောက်၊ကောင်လေး ၁ ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့လေးပေါ့။သူတို့ကဒီတက္ကစီလူသတ်သမားကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးစုံစမ်းချင်နေကြတယ်။အဓိကကတော့သူတို့ Youtube Channel မှာဒီလူသတ်မှုအကြောင်းကို အခင်းဖြစ်ရာအထိသွားစုံစမ်းပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်အနေနဲ့ လူကြည့်များအောင် တင်ချင်တာပေါ့။သူတို့လျှို့ဝှက်စုံစမ်းမှာကို သိသွားတဲ့ သူတို့ဆရာမကလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေစုံစမ်းတဲ့အခါ အုပ်ထိန်းသူရှိဖို့လိုအပ်လို့သူတို့နဲ့အတူ လိုက်လာဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့လိုလေးယောက်သားအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်စုံစမ်းကြတဲ့အခါမှာတော့ မထင်မှတ်ထားတာတွေ၊ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာတွေစပြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်။သူတို့ ဘယ်လိုအံ့သြစရာတွေကြုံရမလဲ၊တက္ကစီလူသတ်သမားကကောတကယ်ရှိတာလား၊နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့
Tanhaji: Unsung Warrior2020
ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် 2020 ရဲ့ blockbuster ကားကောင်းတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး အဂျေးနဲ့ ဆေ့ဖ်အလီခန်းမ်တို့က အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ရာဇဝင်ကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းက မရာထာတပ်မှူး တာနာဂျီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဂိုအင်ယာကြီးစိုးတဲ့အချိန်မှာ အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒိအချိန်အခါမှာ အိန္ဒိယမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးအတွက် လွပ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် မရာထာတပ်သားများစွာရှိပါတယ်အင်အားချင်းမမျှမှုကြောင့် အနိုင်မရဘဲ မဂိုတွေကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အခါ မရာထာအင်ယာပါမှ ခံတပ် ၂၃ ခု မဂိုတွေဘက်ကိုပေးအပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒိထဲမှာ အကြီးမားဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့ ကွန်ဒါနားလည်းပါခဲ့ပါတယ် ဒီခံတပ်ကိုရရှိရင် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ရရှိသလိုပါပဲမဂိုတွေဟာ မတွန့်မဆိုင်းဘဲ အိန္ဒိယတစ်ခွင်လုံးကိုပါ သိမ်းဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော့မရာထာတပ်မှူးကြီး တာနာဂျီးနဲ့မဂိုတပ်မှူးကြီး အူဒေဘန်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်
ရုံတင်ထားတဲ့ သရဲကားတစ်ခုကို တင်ပေးထားပါတယ်။Jump scare အများစုကို သုံးထားတာမို့အသည်းငယ်ရင်တော့ မကြည့်သင့်ပါဘူး။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ခင်ပွန်းသေဆုံးသွားလို့သားတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ပြောင်းလာတဲ့ စုံထောက် မူဒွန်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ လူသေမှုတစ်ခုကို စုံစမ်းရင်းကြောက်စရာအိမ်ကြီးတစ်လုံးထဲက ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ အဲဒီအိမ်ကြီးထဲမှာ အစဉ်အဆက်သေဆုံးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုသိလာပြီးမူဒွန်ဆီကိုပါဒီအန္တရာယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါဒီကိစ္စတွေရဲ့ ဇစ်မြစ်ကိုရှာပြီး အန္တရာယ်တွေကိုကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်
Horror, Thriller အမျိုးအစား ကြိုက်သူများအတွက် ၂၀၂၀ ထွက် ကိုရီးယားဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူဆုံးပါသွားပြီးတဲ့နောက် ယုံးဆန်းဝန်းဟာ အင်နာဆိုတဲ့၁၁နှစ်အရွယ်သမီးလေးနဲ့ အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်…အလုပ်ဇောကပ်လွန်းတာကြောင့်ရော ဇနီးရဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကနေမရုန်းထွက်နိုင်တာကြောင့်ရော panic disorderဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ယုံဆန်းဝန်းတစ်ယောက် တစ်နေ့မှာ သမီးဖြစ်သူအင်နာအိမ်ထဲမှာနေရင်း ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်… တစ်လကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ကလေးတစ်ယောက်က အသက်ရှင်သေးရဲ့လား ?အင်နာ ပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းက ဘာဖြစ်လိမ့်မလဲ ?
အထက်တန်းကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့လီယိုဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ထူးခြားတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်စတားဂဲလ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ…. ‌အရင်ကဘာပြိုင်ပွဲမှာမှဆုမှဖူးတဲ့ Mug Frogsအထက်တန်းကျောင်းဟာ ထူးခြားမှုတွေပြည့်နေတဲ့ စတားဂဲလ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ … ဆုတံဆိပ်တွေရရှိဖို့ အလှည့်အပြောင်းတွေဖြစ်လာအောင် တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်… စတားဂဲလ်ဟာလဲ ကျောင်းအတွက် လူတိုင်းအတွက် ကံကောင်းစေတဲ့ လာဘ်ကောင်လေးတစ်ကောင်လိုဖြစ်လာပါတယ်… သူမရှိရင်မဖြစ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထိရောက်အောင် သူကလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကိုကူညီတတ်တဲ့စတားဂဲလ်တစ်ယောက် အကူအညီမလိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကူညီပေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြဿနာ အကြီးကြီးတက်ပါတော့တယ်…အဲ့ဒီပြဿနာကရောဘာလဲ… သူမ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ အနားမှာ ဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးရောက်လာမလဲ…. ဒီကားလေးဟာ ပုံမှန်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို တွေးစရာတွေအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာအချစ်ကိုတွေ့ရှိချိန် ဖြစ်တတ်တဲ့ ကြည်နူးမှုတွေ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ကျွန်တော်တို့နေ့စဥ် သတိမထားမိပဲ လုပ်နေမိကြတဲ့ အမှားတွေ လူတိုင်းကိုမကူညီသင့်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိုက်ကူးထားတာကို တွေ့ရပါတယ် ဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကလဲ အရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသူပရိတ်သတ်ကြီး ကြည့်ရတာတန်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်
နိုင်ငံပေါင်းစုံက လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကြေးစားအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာစနိုက်ပါအထူးချွန်ဆုံးလို့အများကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီအဖွဲ့ထည်းမှာပဲနောက်ထပ် စနိုက်ပါသမား လူငယ်လေးတစ်ယောက်လဲပါလာပါ၀င်ပါတယ်။မစ်ရှင်တစ်ခုမှာ စနိုက်ပါသမားလေးကြောင့် ဖောက်သည်တစ်ဦးဒါဏ်ရာရသွားတဲ့အခါ ဖောက်သည်တွေကျေနပ်မှု့ရဖို့ နောက်ထပ်မစ်ရှင်တစ်ခုကိုခပ်မြန်မြန်လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မစ်ရှင်က ရေသန့်စက်နဲ့မျိုးစေ့တွေကို အစိုးရတပ်နဲ့သူပုန်တပ်ကြားကရွာလေးဆီကိုပို့မယ့် နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကလူနဲ့ယာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမှာပါ။ ပို့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေနေရာကိုရောက်ပါ့မလားတစ်ကယ့်စနိုက်ပါ အစစ်ရဲ့လက်စွမ်းက ဘယ်လိုနေလဲမစ်ရှင်ရောအောင်မြင်မှာလားဆိုတာတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆက်ကြည့်ပါ။စစ်ကားနဲ့စနိုက်ပါ ကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်ကျေနပ်စေမယ့်ကားလေးပါပဲ
မာရီဂီးလ်ဘတ်သည် သမီး ၃ယောက်အတွက် ရုန်းကန်နေရသော မုဆိုးမတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အငယ်ဆုံးသမီးမှာ စိတ်ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီး အကြီးဆုံးသမီးမှာ တခြားမြို့တွင်အလုပ်လုပ် နေသည်။ တစ်ရက်တွင် သမီးကြီး ဖြစ်သူ ပျောက်နေကြောင်း ကြားသိလာရသောကြောင့် သမီးကြီး အပေါင်းအသင်းများထံ သွားမေးမိသည်။ ထိုအခါမှ သမီးကြီး ပျောက်ဆုံးမှုမှာ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်သည့် အပြင် မိန်းကလေး တချို့လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ပျောက်ဆုံးကြောင်း သိလာရသည်။ သမီးပျောက်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပေမယ့်လည်း လုံလောက်တဲ့သက်သေမရှိတဲ့အပြင် စောင့်ဆိုင်းဆဲကာလဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက် ကြောင့် မာရီဂီးလ်ဘတ်အတွက် သမီးဇောနဲ့ အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်ရပါတယ်… ဒါပေမယ့် သမီးအတွက် သူမဟာ ပူဆွေးနေမယ့်အစား အစွမ်းကုန်ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစား ပါတော့တယ်….. သမီးလေးကို ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား…. ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေကြရတဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများရှိနေမလဲ…… လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဇာတ်လမ်း နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့မည့် ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Ko Myo ပဲဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီကားမှာ ဘန်အဲဖလက်ကို ဘတ်စကတ်ဘောနည်းပြကြီးဂျက်ကန်နင်ဟန် အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာပါ …..ဂျက်ဟာ လူမှုရေးပြဿနာပေါင်းစုံကြောင့် စိတ်ထောင်းလို့ကိုယ်ကျေပြီး ကြုံရာကျပန်းအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပါ ….. မိန်းမနဲ့လဲအဆင်မပြေ မိသားစုပေါ်လဲနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ဂျက်တစ်ယောက် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီး မနက်ဆိုလဲဘီယာလေးနဲ့ အလုပ်ချိန်မှာလည်း ဘီယာလေးတမြမြနဲ့ အလုပ်သိမ်းပြန်တော့ ဘားလေးဒိုးပြီး တချိန်လုံး စိတ်ဒဏ် ရာတွေကိုအရက်နဲ့ကုစားနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ ….. ဘာအလုပ်မှမယ်မယ်ရရတစ်ထိုင်တည်းမလုပ်ပဲ အရက်ချည်းသောက်နေတဲ့ ဂျက်ဆီ တစ်ချိန်ကသူအောင်ပန်းဆင်ခဲ့တဲ့ ဘတ်စကတ်ဘောလောက ကလူတစ်ယောက်နည်းပြလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ် ….. သူ့ဆီကမ်းလှမ်းတဲ့သူက Church ကျောင်းကဘုန်းတော်ကြီးဒဗိုင်းပါ …. ခရစ်ယန်ဘာသာရေးဘတ်စကတ်ဘောအဖွဲ့ ကို စိတ်ဒဏ် ရာရပြီးအရက်နဲ့လက်မပြတ်တဲ့ဂျက်ကိုမှ ဘယ်လိုနားလည်မှု ၊ ဘယ်လိုယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေနဲ့ ဘစ်ရှော့ဟေးဆိုတဲ့အညတရဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကို နည်းပြဖို့ ငှါးတယ်မသိပါဘူး… သူ့အပေါ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကို တစ်ချိန်ကရှိခဲ့ဖူးတဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ ထိပ်ဆုံးထိပြန်ပို့နိုင်မလား…..မူးရူးပေတေနေတဲ့ ဘဝကနေရုန်းထွက်ပြီး အားလုံးကို အံအားသင့်အောင်ပြန်လည်စွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့…. IMDb မှာ 7.1 Rotten Tomatoes မှာ 83% နဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီး မင်းသားကလဲ Ben Affleck ဆိုတော့အထူးညွှန်းစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး
ကလေးဘဝကတက်ဆက်ဇ်မြို့မှာဖိနပ်တိုက်သမားအဖြစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လူမည်းလေးဘာနာ့ဒ်ဂါရက်တ်ဟာ ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စနဲ့ပြည့်စုံပြီး ပါရမီပါတဲ့အတွက် ဖိနပ်တိုက်ရင်းကြားရတဲ့စကားတွေကို သေချာလေ့လာမှတ်သားရင်း ပညာဝမ်းစာဖြည့်ပါတယ်….. သူအရွယ်ရောက်လာတော့ လော့စ်အိန်ဂျယ်မြို့ကိုပြောင်းလာရင်း ဂျိုးဆက်မောရစ်ဆိုတဲ့ လူမည်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ စပ်တူအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် လူမည်းတစ်ယောက်ကိုဘယ်သူမှ အဖက်လုပ်မဆက်ဆံခြင်ကြတဲ့အတွက် သူတို့အခက်အခဲက တကယ့်ကို ကြီးမား လွန်းပါတယ်…သူတို့ (၂) ဘယ်လို ဉာဏ်နီ ဉာဏ်နက်တွေ ထုတ်ပြီး ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး….. ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၁၉၅၀ခုနှစ်ကျော်ကျော်က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘဏ်တစ်ခုကိုဝယ်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ လူမည်းနှစ်ယောက်အကြောင်းကို ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်… မှတ်သားစရာများစွာပါရှိသလို သူတို့ရဲ့ကြိုးစားပုံတွေလည်းတကယ့်ကို အတုယူစရာပါပဲ… အဓိက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult နဲ့ Anthony Mackie တို့ကိုတော့ အတော်များများသိကြမှာပါ…. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ K နဲ့ MarTizasပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားဟာ ကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ထွေထွေထူးထူူး ညွှန်းဆိုဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးဘောလီဝုဒ်မှာ ခပ်ပေါပါဇာတ်ကားတွေထွက်သလို ဒီလို ခံစားမှုပေါင်းစုံပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေလည်း နှစ်စဉ်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်အာမခံနိုင်တာတစ်ခုကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထွက် ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာလည်း တခြားသူမဟုတ်ဘဲ Queen ဖြစ်တဲ့ Kangana Ranautဒါရိုက်တာကလည်း ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Nil Battey Sannata Bareilly Ki Barfi တို့၏ဒါရိုက်တာ Ashwiny Iyer Tiwari ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ … ကဘတ်ဒီအားကစားဘဝကနေ အနားယူလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမား ဂျာယားနီဂမ်ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တစ်ကျော့ပြန်ကစားဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ အသက် ၃၂ နှစ်၊ ၇ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ဟာ ကစားသမားဘဝနဲ့ အောင်မြင်မှုကိုနောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ဆွတ်ခူးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိမလဲ ဘယ်သူတွေက ကူညီအားပေးကြမလဲသူဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားမလဲဆိုတာကို ရသစုံပေးစွမ်းသွားမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားကို အားလုံးပဲ ကြည့်ရှု့ခံစားလိုက်ကြပါခင်ဗျာ
Sci-fi / Thriller ကားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် လတ်တလောထွက်ထားပြီးNow you see me တို့ Zombie Land တို့ထဲကမင်းသား Jesse Eisenberg ပါဝင်ထားတဲ့ကားလေး။လူငယ်စုံတွဲ တတွဲက အတူနေဖို့အိမ်လေး တအိမ်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်။အိမ်ရာစျေးနှုန်းတွေကလည်း သိတဲ့အတိုင်း တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတယ်။ အသိတယောက်ကလည်း အိမ်ရာကောင်းကောင်းတွေ့ရင်လက်မနှေးဖို့ ရတုန်းယူထားဖို့အကြံပေးသွားသေးတယ်။အဲနေ့ညနေမှာပဲ သူတို့စုံတွဲက အိမ်ရာတွေရောင်းတဲ့နေရာမှာအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်နဲ့ သွားတွေ့ ခဲ့ကြတယ်။အကျိုးဆောင်ပုံစံကတော့ တမျိုးကြီးပဲ။ထောင့်မကျိုးတာလည်း မဟုတ် ရိုင်းစိုင်းတာလည်းမဟုတ်တမျိုးကြီးဖြစ်နေပေမယ့် အပြောကောင်းတော့သူတို့အိမ်ရာကို ပုံထဲတင်မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အကျိုးဆောင်အပြောအရ နေရာကလည်းအဆင်ပြေမယ့်ဆင်ခြေဖုံးနေရာအိမ်ရာတွေကိုလည်း လူတွေကဝယ်ပြီး နေရာရွှေ့လာကြတော့မှာ။အိမ်ရှာနေတာလည်း ကြာနေပြီမလား။အဆင်ပြေရင်တော့ ဝယ်လိုက်ကြမယ်စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့။အဲလိုနဲ့ သူတို့အိမ်ရာတွေဆီသွားခဲ့ကြတယ်။အိမ်တွေကတော့ ပုံစံတူတွေပဲ။အဲလိုနဲ့ သူတို့ကြည့်ရမယ့် အိမ် အမှတ်ကိုးကိုရောက်လာကြတယ်။အိမ်အကြောင်းကို ရှင်းပြနေရင်း သူတို့နောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်ချိန်မှာပဲအကျိုးဆောင်က ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။အဲဒါနဲ့ သူတို့လည်း အဲအိမ်ရာဝင်းထဲကနေ ပြန်ထွက်ဖို့ လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်္ကပါလိုဖြစ်ပြီး အိမ်အမှတ်ကိုး ကိုပဲ ပြန်ရောက်လာလာနေတယ်။သူတို့ ဘယ်လိုပဲ ထွက်ဖို့ ကြိုးစား ကြိုးစား ထွက်မရခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့ဆီကို မမျှော်လင့်တဲ့ အရာတခုပါ ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့သူတို့ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ ထွက်နိုင်သွားမှာလားဆိုတာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြည့်ရမယ့် ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ Stay Home ကာလမှာ အိမ်ထဲကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကားလေးကို ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။
ဟိုင်း အချောလေးတို့ အိမ်ထဲမှာ နေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်နိုင်ပြီဆိုတာ သိပြီးကြရောပေါ့။မပျင်းရအောင် အကျိုးဆောင်ပေးရရင် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတွေနဲ့ တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခုတစ်ဖန် တင်ဆက်မှာကတော့… ဘောလိဝုဒ် မိသားစုဒရာမာကို ဟာသလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။မင်းသားကြီးကလည်း လူတိုင်းသိပြီးသား ဖြစ်ပြီး မင်းသမီးချောလေးတွေလည်း ပါနေပါသေးတယ်နော်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့… ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက စော်ကြည်ဘဲ တစ်ယောက် ရှိသတဲ့ပေါ့။ ခုခေတ်အခေါ် စားဘဲကြီးပေါ့။ စားဘဲကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကလည်း လွယ်လွယ်ရရိုးလား။မနက်ဆို ၁၂နာရီမှ အိပ်ယာထ၊ ရုံးကို ၃နာရီလာ၊ ညနေ ၅နာရီရုံးဆင်း၊ ညဘက်ဆို ကလပ်တက်၊ စော်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်။သူ့အလုပ်ကတော့ အိမ်ခြံမြေအကျိူးဆောင် ပွဲစားပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အရွယ်က အိမ်ထောင်ပြုသင့်နေပြီလို့ မိသားစုက ဖျောင်းဖျကြတယ်။လောကမှာ ဘာအကြောက်ဆုံးလဲလို့ မေးရင် မိန်းမယူ၊ ကလေးမွေးပဲ။ သူ့ခံယူချက်က ရှိသေးတယ်။ ဘာတဲ့။အိမ်ထောင်ဘဝဆိုတာ ယောက်ျားတွေကို ကျရှုံးစေတဲ့ အရာတဲ့ဗျ။စော်တွေကို ထည်လဲတွဲနေတဲ့ ဘဲကြီးကတော့ မိန်းမယူစရာမှ မလိုတာ။တနေ့တော့ မိန်းကလေးချောချောလေးတစ်ယောက်ကို ဘားမှာတွေ့တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘဲကြီးက သွားရည်ယိုတာပေါ့။ကောင်မလေးက ပြောရှာတယ်။ သူနဲ့ စကားပြောချင်လို့တဲ့။အဲ့ဒီမှာ စော်တွေ့တိုင်း ခေါ်နေကျသူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားတော့… ကောင်မလေးက စကားတစ်ခွန်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့…. လူပျိုကြီး ကြက်သီးမွှေးညှင်းထစရာ အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး……… ကဲ ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားကြည့်ပါတော့ဗျာ။စပွိုင်လာမမိအောင် အညွှန်းရေးထားပေမဲ့ အညွန်းမျိုးစုံဖတ်ထားကြသူအဖို့တော့ စပွိုင်းခံထားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
Young President And His House Wife 2020
2020 ခုနှစ်မှာ ထွက်ထားတဲ့ ရိုမန့်အချစ်ကားလေးပါပဲအိမ်တွင်းပုန်းကာလတွေမှာ အပျင်းပြေကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်..အညွန်းကတော့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိပြီး တော်တဲ့ မန်နေဂျာလီချန်ကွမ်း မှာသူချစ်ရတဲ့ လှပတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် ကျားမိန်ဆိုတဲ့ မိန်းမလှလေးရှိနေပေမယ့်တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ သာယာလှပတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝထဲကိုလော့ရှောင်မန်လို့ ခေါ်တဲ့ မိန်းမလှလေး ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီး အေးချမ်းသာယာတဲ့သူတို့ဘဝလေးကိုမုန်းတိုင်းတွေထန်လာအောင် ဘယ်သူကကြိုးကိုင်နေခဲ့တာလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ကြပါစို့နော်
၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကထွက်ရှိထားတဲ့ Justice High ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကားလေးကတော့လူငယ်တက်သစ်စသရုပ်ဆောင်လေးတွေတော်တော်များများအားဖြည့်ပါဝင်ထားတဲ့ ကျောင်းသား Action ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ချီယောင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဂွန်းဆူဒို(တိုက်ကွမ်ဒိုလိုသိုင်းပညာတစ်မျိုး)ကိုတစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင်မလေးပါ။ကျွမ်းဆို သူအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ ဒီဂွန်းဆူဒိုအားကစားရုံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ။သူက အရင်တက်နေတဲ့အထက်ကျောင်းတစ်ခုကနေမတရားအနိုင်လာကျင့်တဲ့သူတွေကို ပညာပေးဆုံးမခဲ့လို့ကျောင်းပြောင်းလာရတဲ့ မဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့။သူကျောင်းပြောင်းလာပြီးမကြာဖူး။ကျောင်းအသစ်မှာအဲ့လိုပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကျောင်းသားလူမိုက်အုပ်စုကိုတွေ့လို့ အဲ့ကောင်လေးကိုအဲ့လူဆိုးလေးတွေလက်က ကယ်ပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ဒီကားမှာထူးခြားတာက ကောင်လေးကိုကောင်မလေးကကာကွယ်ပေးရတာ။ကောင်လေးကတော့ ကိုယ်ခံပညာမတတ်တဲ့ခပ်ရိုးရိုးကောင်လေးပေါ့။သူနာမည်က ဂျောင်းဂူတဲ့။နောက်ထပ်ကျောင်းသားကားလေးတွေထုံးစံအတိုင်းသုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုက လှလည်းလှ သိုင်းလဲတတ်တဲ့ချီယောင်းကို အဲ့ကျောင်းက ဟယ်ဆောင်းလို့ခေါ်တဲ့စီနီယာအကိုကြီးကလည်းကြိတ်ကြွေနေတယ်။အဲ့စီနီယာကလည်းပြောရရင်ကျောင်းမှာ လူဆိုးထိန်းသဘောမျိုးပေါ့။ရန်ဖြစ်ရင်ပွဲတိုင်းကျော်တယ်။ဒါပေမယ့် လူဆိုးကနေလူကောင်းဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ဂျောင်းဂူနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပဲ စီနီယာဟယ်ဆောင်းကတော့တိုက်တတ်ခိုက်တတ် ရန်ဖြစ်လဲ သူမပါမပြီး အထက်တန်းမှာနှစ်ချီနေတဲ့ Oldie စီနီယာတစ်ယောက်ပေါ့။နောက်ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီး တခြားလူမိုက်အဖွဲ့တွေကိုကျောင်းသားတွေဆီကမုန့်ဖိုးတွေကို အဓမ္မတောင်းပြီး ဗိုလ်လုပ်နေတဲ့လူဆိုးအဖွဲ့လည်းရှိတယ်။ဒီအဖွဲ့က ဂျောင်းဂူကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကျောင်းသားလူဆိုးလေးတွေရဲ့ ဆရာတွေပေါ့။ဒါကိုချီယောင်းကဆုံးမလိုက်တာကို အံ့ဒီကကျောင်းသားခေါင်းဆောင် လူဆိုးအဖွဲ့ကမကျေနပ်ကြဖူး။အဲ့အချိန်ကစပြီးချီယောင်းကို ညှိုးထားကြတယ်။ဒါကိုဒီကျောင်းသားလေးသုံးယောက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ငယ်ရွယ်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကကောဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါ။ညွှန်းပေးရရင် ဒီကားလေးက Action ကားလေးဆိုလို့အတိုက်အခိုက် အသတ်အပုတ်ကြီးပဲမဟုတ်ပဲ ကျောင်းသားဘဝကအပျော်လေးတွေ၊ Romanceလေးတွေပါ တစ်ဖန်ခံစားပြီးကြည့်နိုင်လို့မိန်းကလေးရောယောကျာ်းလေးကော ကြည့်ပျော်မယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေး တစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ လာပါပြီ ကိုးရီးယား ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး Jung Woo Sung နဲ့ Jeon Do Yeon တို့နဲ့အတူ တခြား နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားသစ်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကို ကွင်းဆက် မှုခင်းကားတွေ​က ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းရေးရင် Spoiler ဖြစ်တတ်လို့ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း မရေးတော့ပါဘူး ကာရိုက်တာတွေကိုပဲ အကြမ်းဖျင်း ပြောပြသွားပါ့မယ် ဒီကားထဲမှာ ခပ်ပျက်ပျက် သိုက်တူးတတ်တဲ့ အမျိုးသမီး မတွေ့သင့်တဲ့သူနဲ့ တွေ့မိပြီး ပြဿနာတောထဲ ရောက်သွားတဲ့ သင်္ဘောဆိပ်က ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဘားပိုင်ရှင် ငွေးတိုးချေးစားသူ သူဋ္ဌေး ဘားမှာ အရက်ငှဲ့ပေးရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ချွေးထုတ်ခန်းက သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်း တရားမဝင်လာရောက်နေထိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ရဲတစ်ဦး နဲ့ သန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ ငွေအိတ်ကြီးတစ်အိတ် သူတို့ ကာရိုက်တာတစ်ခုချင်းဆီ ဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဆက်ပြီးသား ကြည့်ရှုလိုက်ပါ ကြည့်ရကျိုးနပ်မယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ် IMDb ကလည်း 7.4/10 ပါ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေရဲ့အသက်ကို အများဆုံးချွေခဲ့တဲ့ သေနတ်ကို ပြောပါဆိုရင်အေကေ-ဖော်တီဆဲဗန်း (AK-47) မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကိုပဲ ပြောရမှာပါပဲ။အဲဒီလက်နက်ဟာ လက်နက်ငယ်လောကကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့မှာ အသုံးပြုတာခံခဲ့ရသလိုလက်နက်ငယ်ပေါင်းများစွာဟာလည်း ဒီသေနတ်ကို အခြေခံပြီး တီထွင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီသေနတ်ကို official အနေနဲ့ ကာလရှညိကော့ဖ် ရိုင်ဖယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရုရှားရဲ့ လက်နက်တီထွင်သူ ဉာဏ်ကြီးရှင် မီခေး ကာလရှညိကော့ဖ် ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့လို့ပါပဲ။ကာလရှညိကော့ဖ်ဟာ အတန်းပညာ ဆုံးခန်းမတိုင်ခဲ့သလို တပ်ကြပ်အဆင့်နဲ့ တီထွင်သူဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီသေနတ်ကို မတီထွင်ခင်မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာ တင့်တပ်သားအနေနဲ့ အကြီးအကျယ် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းက ဆိုဗီယက်တပ်တွေနဲ့ ဂျာမန်တပ်တွေ ဘတပြန် ကျားတပြန် တိုက်ခိုက်နေကြချိန်မှာဆိုဗီယက်တွေရဲ့ ရိုင်ဖယ်ဟာ ဂျာမန်တွေရဲ့ Sturmgewehr 44 rifle တွေကို မယှဉ်နိုင်ဘဲ အတော်အထိနာကြတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ဆိုဗီယက်ဘက်မှာလည်း လက်နက်တွေကို ဆက်တိုက်စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်လက်နက်တစ်ခေတ်ဆန်းသွားလောက်စေမယ့် လက်နက်မျိုး ပေါ်မလာခဲ့သေးပါဘူး။ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ ကာလရှညိကော့ဖ်ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းရယ် ဆိုဗီယက်ရဲ့ စတာလင်ဆုရ တီထွင်သူသူရဲကောင်း ဖြစ်လာတဲ့အထိ အခက်အခဲတွေ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပုံကို ပြသထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အတ္ထုပ္ပတိရုပ်ရှင် အမျိုးအစားကို ကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ကားပါပဲ။
The Silence of the Marsh 2020
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Netflix မှာ ဒီရက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားပါMoney Heist ထဲက ဘာလင် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား ပီဒရို ကခေါင်းဆောင်မင်းသား အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့Q ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာဟာ ထိတ်လန့်သည်းဖို လူသတ်ဇတ်လမ်းတွေ ရေးပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…သူ့ ဝတ္တုထဲက လူသတ်သမားဟာ လူတွေကို ပိပိရိရိ သတ်ပြီးအစဖျောက်တဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်လွန်းလို့ ဘယ်တော့မှ ဖမ်းမိတဲ့သူပါဒါ့အပြင် နိုင်ငံအတွင်း လဘ်စား ချစားနေတဲ့ နာမည်ကျော်တွေကိုမှရွေးသတ်တက်တဲ့ ဇတ်ကောင်မျိုးပေါ့….လူတွေ မသိထားတာကတော့ ဒီအောင်မြင်နေတဲ့ဇတ်လမ်းရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြတ်ရပ်မှန် တစ်ခုကိုပါ….ဇတ်လမ်းက အေးသလို ရှိလိုက် ဝုန်းဒိုင်းကျလဲလိုက် နဲ့မပျင်းရိရအောင် သင့်ကို တစ တစ ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Cast Away 2020
2000 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Cast Awayဇာတ်ကားမှာဆိုရင် မင်းသားကြီးTom Hank ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီး ဒီဇာတ်ကားဟာ.အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်ပါဝင်ရိုက်ကူးသမျှ ဇာတ်ကားတိုင်းကို အောင်မြင်စေသည့် မင်းသားတစ်လက်ဟုပင် တွမ်ဟန့်ခ်စ်ကို ညွှန်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်…Forrest Gum၊ Big၊ Sleepless in Seattle၊ Apollo 13၊Saving Private Ryan၊Catch Me If You Can၊The Green Mile၊Cast Away၊ Toy Story အစရှိသည့် ဇာတ်ကားများတွင်ဟန့်ခ်စ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယင်းရုပ်ရှင်များ ရုံတင်ရာမှ ရရှိသည့်ရုံဝင်ကြေးသည် အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံတည်းတွင်ပင်ဒေါ်လာ ၄.၂ ဘီလီယံမျှ ရှိခဲ့ပါတယ်..တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနှင့် ဆိုလျှင်မူအဆိုပါ ငွေပမာဏ၏ နှစ်ဆအထိ တိုးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်…အော်စကာနှစ်ဆုရှင် ဟန့်ခ်စ်ကို ဟောလိဝုဒ်သမိုင်းတွင် အကျိုးအမြတ် အဖြစ်ထွန်းဆုံး စာရင်းဝင်မင်းသားတစ်လက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီးသူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှုမှာမူ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော်မျှ ရှိပါတယ်…Cast Awayကြည့်ခဲ့သမျှတွေထဲက စိတ်ထဲ စွဲနေအောင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကားတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Tom Hanks သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Cast Away ကို ပထမဆုံး ပြောချင်ပါတယ်။တစ်ကားလုံးမှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်က ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်တည်းသရုပ်ဆောင်သွားတယ်။ တစ်ယောက်တည်းသရုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ လုံးဝရိုးအီသွားခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ကားထဲမှာ မင်းသားက ပစ္စည်းတွေပို့တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလုပ်တယ်။သင်္ဘောနဲ့ ပစ္စည်းသွားပို့တဲ့အခါ သင်္ဘောပျက်ပြီး လူမရှိတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ကို တစ်ယောက်တည်း ရောက်သွားခဲ့တယ်။သူလွတ်မြောက်ဖို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပေမဲ့ လုံးဝမရဘူး။၈ လလောက်ထိကြာ လာတယ်ပေါ့။အဲဒီမှာ ဘယ်လောက်ထိ ကာရိုက်တာကိုလုပ်ပစ်လိုက်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကအစ အကုန်လုံး ပိန်ခြောက်သွားတဲ့အထိလုပ်ချပစ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံး သွေးပေသွားတဲ့ ဘောလုံးလေးကိုလက်နဲ့ မျက်နှာပုံစံလေးဆွဲပြီးစကားပြောရတာ။ အရမ်းအထီးကျန်နေရတဲ့ဘဝကိုပြလာတာ။ဘာမှမရှိတဲ့ဟာကို အရှိလုပ်ပြီး ပြောနေတာအိုက်တင်အရမ်းကိုကောင်းတယ်။ကြာလာတဲ့အခါ ငါးတွေဘာတွေကစမီးမကင်တော့ဘဲ အစိမ်းလိုက်စားလာတာ။ဖြစ်သလိုနေတတ်လာတာ။အာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲ လုပ်တော့တာပေါ့။နောက်ဆုံး ဒီကနေမဖြစ်ဖြစ် အောင်ထွက်မယ်ဆိုပြီး လှေတစ်စင်းနဲ့ ဇွဲမလျှော့ဘဲ ထွက်ခဲ့တာပေါ့။နောက်ဆုံး သူပြန်ရောက်လာ တာကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ပွဲလုပ်တာ။အဲဒီမှာ ဈေးကြီးတဲ့ ပင်လယ်စာ အစားအစာတွေပုစွန်တွေကျွေးတာပေါ့။ဟိုမှာသူကအစိမ်းလိုက်စားလာတာတွေဆိုတော့သူ့အတွက် ရယ်စရာမျိုးလေးဇာတ်သိမ်းထားတာ။မှတ်မှတ်ရရဇာတ်ဝင်ခန်း တွေဆိုရင်ဘောလုံးလေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အခန်း တွေအရမ်းကြိုက်တယ်။ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ လိုက်ပြီးအထီးကျန်မှုကို ခံစားလာရတယ်။တစ်ကားလုံးအရမ်းကို perfect ပါ။ တစ်ယောက်တည်း နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းက အရမ်းကိုဆန်းကြယ်တယ်။ပြီးတော့ ဖျော်ဖြေရေးသက်သက် မဟုတ်ဘဲဇွဲရှိဖို့တွေ၊ ဘဝမှာ မရောင့်ရဲ မတင်းတိမ်နိုင်ဘဲစိတ်ဓာတ်ကျမနေဖို့တွေ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်စရာတွေ ထည့်ပေးထားတဲ့ ကားပါပဲ။(ရုပ်ရှင်အညွှန်းများကို 7daydaily မှ စာပိုဒ် တချို့နှင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသွေး ပြောကြားထားသောအင်တာဗျူးမှ ကောက်နုတ်တင်ပြထားသည် )
Anjaam Pathiraa (2020) ========================== ဒီတစ်ခါတော့ crime movie တွေကို နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb မှာ Rating 8.1 ရရှိထားတဲ့ Anjaam Pathirra ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မှုခင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာအတွက် စာတမ်းပြုစုနေတဲ့ Anwar ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတစ်ခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ် ။ သေဆုံးမှုဟာတစ်ခုခုပြီးတစ်ခု ဆက်လာပေမယ့် ရဲတွေ​ရော သူရောဟာ ဘာကိုမှမဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအမှုအတွက် Anwar တစ်ယောက် နေ့ရောညရော စဉ်းစားနေခဲ့ပြီး တစ်နေ့တော့ သူဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့သဲလွန်စလေးကနေ ဆက်စပ်ပြီး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ်အမှုတစ်ခု ထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ Anwar ဟာ ဘယ်လိုဆက်ပြီးရှာဖွေမလဲ … ရဲတွေကရော ဘယ်လိုဆက်ပြီး လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦးနော်…….
အချစ်ဆိုတာမျိုးကမထင်မှတ်ပဲအခြေအနေမျိုးစုံမှာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်တတ်လာတာမျိုးပါ။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို သက်ဆုံးတိုင်ကာကွယ်ပေးချင်တယ်။စောင့်ရှောက်ပေးချင်တယ်။ ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၂၀ကထွက်ရှိထားပြီးAction/Drama အမျိုးအစားကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဆူဝန်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ကဘဝမှာအသက်ထက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက်ဘဝကိုပေပေတေတေနေလာခဲ့ပါတယ်။သူမှာသူငယ်ချင်းနှစ်ယာက်ရှိတယ်။ထယ်ယောင်း၊ချောလေးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လူမိုက်ဝင်လုပ်နေခဲ့တယ်။တရက်မှာတော့မထင်မှတ်ပဲ သူဘဝထဲကိုသူချစ်သူအခြေအနေနဲ့တူတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်မလေးကို ဆူဝန်ကကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့သလိုသူမအတွက်ဆိုအမြဲအဆင်သင့်ရှိနေပေးရမယ့်ဘော်ဒီဂတ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဘဝထဲအမှတ်မထင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကကော ဘယ်သူလဲ ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ဇာတ်လမ်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။Action ကားဆိုပေမယ့်အချစ် Romance လေးလဲပါသလိုဇာတ်လမ်းလေးကလည်းဆန်းပြီးအလှည့်အပြောင်းလေးတွေလည်းရောစပ်ထားပါတယ်။ပိတ်ရက်မှာ Action ကားကောင်းကောင်းမျှော်နေတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးလည်းအကြိုက်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Wendy(2020)Wendy ရုပ်ရှင်ကားလေးက ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အရမ်းကို နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Peter Pan ဇာတ်ကားကိုပုံစတစ်မျိုးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ကားသစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ဒီမှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့ ဂျိမ်းနဲ့ ဒေါ့ဆိုတဲ့ အမြွှာ အကို နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ မိသားစုလေးဟာ စားသောက်ဆိုင်လေး ဖွင့်ထားပြီး နေ့ရက်များကို သမရိုးကျ ဖြတ်သန်းကြပါသည်။ ၀င်ဒီလေးဟာ ငယ်ငယ်လေးတုန်းက အိမ်နီနားချင်း ကလေးတစ်ယောက်က ရထားအမိုးပေါ်ကို ပြေးတတ်သွားတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်ရပြီးနောက်ထူးခြားဆန်းကျယ်မှုများ၊ စွန့်စားခန်းများကို အမြဲတွေးနေခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်မှုအရသာကိုခံစားပြီး လေထဲမှာ ပျံဝဲတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေကို စွဲလန်းနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ တစ်ညမှာ ပြတင်းပေါက်တံခါးကနေ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရထားပေါ်ကို ခုန်တတ်သွားတာကို မြင်ရာမှသူနဲ့ သူ့အကိုတို့ သုံးယောက်သားအတူတူ ထိုကောင်လေးနောက် ကို လိုက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ကောင်လေးဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ ပီတာပန်များဖြစ်နေမလား။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး သူတို့သုံးယောက်ရဲ့စွန့်စားခန်းကြီးစတင်ပါပြီ။ထူးဆန်းတဲ့ ကျွန်းကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ မောင်နှမ သုံးယောက်က အသက်ရှင်ဖို့ ရုံးကန်ကြရပုံ၊ငယ်ရွယ်သူတို့၏ စိတ်ဓါတ်တို့ကို ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခန်းနှင့် တစ်ခန်းဘာဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ မရနိုင်လောက်အောင် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ ကျွန်းပေါ်က ကလေးတွေထဲက ဘယ်သူက ကပ္ပတိန်ဟုဒ် ဖြစ်သွားလဲဆိုတာ ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရမှာပဲ။ငယ်ငယ်လေးတုန်းကကြည့်ရတဲ့ ပီတာပန်ဇာတ်ကားလေးလိုမျိုး ဝင်ဒီဘက်က ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Wendy ဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင်လည်း တစ်မျိုးဆန်းပြားပြီး ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
Clover 2020 ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ကလိုဗာ လို့ခေါ်တဲ့ ၁၈ နှစ်သမီးလေးအကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို…….. Clover(ကံကောင်းစေတဲ့ပဲရိုင်းရွက်)အကြောင်းလည်းပြောထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကားရဲ့အစမှာ အမြဲေ-ာက်နဲ့ -ီးကိုပါးစပ်ကမချတဲ့ ညီအကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖရန့်ကီနဲ့မစ်ကီ တို့နှစ်ယောက်က သူတို့မိဘဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်ကပိုင်လာတဲ့ဘားကိုသူတို့လက်ထဲမှ ဆုံးခါနီးတော့ နှစ်ကောင်သားရန်ဖြစ်တာနဲ့စထားတာပါ။ သူတို့က ဇာတ်လမ်းအစမှာလည်းရန်ဖြစ်တယ် အလယ်လည်းဖြစ်တာပဲ ပြီးခါနီးတောင်ဖြစ်သွားသေးတာ အဲ့ အသတ်ခံရခါနီးတောင် ရန်ဖြစ်သေးတာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့သေဖို့နီးစပ်လာတိုင်း အဲ့ပဲရိုင်းကိုတစ်နေရာရာမှာတွေ့ရင်လွတ်လွတ်လာကြတယ်။အဲ့တာလည်း ဒီကားမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ထူးခြားတာက ဇာတ်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကလိုဗာမှာက အမေနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲ့အမေနှစ်ယောက်က လူမိုက်တွေ(ဂေါ်ချက်ပဲ) နောက်တစ်ခုက မစ်ကီ ဖရန့်ကီကိုပြောတဲ့စကားတွေ၊အဲ့အမေနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့အပေးအယူမျှမှုတွေ က ပထမစကြည့်တုန်းက BL တွေလားလို့တောင်ထင်သွားစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့အမေနှစ်ယောက်က သူတို့ကိုခိုင်းထားတဲ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ ကလိုဗာကိုဘယ်လိုသုံးခဲ့လဲ………….ညီအကိုနှစ်ယောက်ရော နောက်ဆုံးအသက်ရှင်သွားလား……..ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဟာသပါနှောပြီးတော့ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ
“ဤဇာတ်ကားနှင့်ပက်သက်၍ ခံစားမိသမျှ. . .”လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်(စိတ်ရိုင်းကိုယ်စီ) ရှိကြတယ်။ဘာကြောင့်များ လူတစ်ယောက်ဟာ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး လုပ်မိတဲ့အထိ ကိုယ့်စိတ်ရိုင်းကို ကိုယ်တိုင်အရှုံးပေး​ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတဲ့ ချည်တိုင်ကနေ လွှတ်ပေးလိုက်ရတာလဲ?မနေ့က ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်မိတော့ ဇာတ်ကားရဲ့အစအလယ်အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တွေးနေမိတာက “လူ့စိတ်ထဲက အမှောင်ဘက်ခြမ်း(Darkside)”အကြောင်းပါပဲ။ တစ်ချို့လူတွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်က နားမလည်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း သူများနဲ့မတူတဲ့ စိတ်ရိုင်းတစ်မျိုးတော့ ရှိနေမှာ သေချာတယ်။ (ကိုယ်တိုင်လည်း သိတဲ့သူ သိကြမှာပါ)ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း ပြောပါဆိုရင်တော့ လည်ပတ်အောင် ပြောပြနိုင်ဖို့က ခဲယဥ်းမယ်ထင်တယ်။ဇာတ်လမ်းက အက်ဆစ်နဲ့အပက်ခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုပြန်လည်တည်​ဆောက်ယူသလဲသူ့လိုမျိုး နောက်ထပ်အတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကို တက်ပြီး “အက်ဆစ်ရောင်းချမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်”ဖို့ အယူခံဝင် ၊ အဆိုပြုလွှာတင်ကာ. . .နောက်ဆုံး ဥပဒေပြစ်ဒါဏ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့အထိ ကြိုးစားပုံကို ရိုးရိုးလေး ရိုက်ပြထားတာပါပဲ။ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ ပရိတ်သတ်ကို မက်ဆေ့ပေးချင်တဲ့ အချက်တွေကို ဇာတ်ကားအစမှာရော အဆုံးမှာပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ရင်ဖိုစရာ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေထက်ကို ဆင်ခြင်စရာတွေ ၊ ပြင်ဆင်စရာတွေကို မြင်မိစေပါလိမ့်မယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ဖို့အတွက် မင်းသားရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ သုံးမထားပဲ မင်းသမီး Deepika Padukone တစ်ယောက်သာ သုံးထားတာမို့ ၊ ဘတ်ဂျက်လည်း အင်မတန်နည်းပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့ တင်ပြချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယပြည်နယ်လေးခုမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ပြသခွင့်ရခဲ့သလို ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကြားမှာလည်း အပြုသဘော ဝေဖန်ချက်တွေ ရခဲ့ပါတယ်။အညွှန်းအနေနဲ့ ရေးပေးထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဘာသာပြန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်တာမို့ဖော်ပြချင်တဲ့ အချက်တွေ ၊ ဘာသာပြန်ရာမှာ ဥပဒေဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားနည်းခဲ့ရင် ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ….။
ဒီတစ်ခါ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် ရုံတင် အချစ်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မင်းသား/မင်းသမီး နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း ပရိသတ်အကြိုက် လူငယ် ခပ်ချောချောတွေချည်းပါပဲမိန်းကေလးပရိသတ်တွေအကြိုက် Kartik Aaryan နဲ့ ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေအကြိုက် Sara Ali Khan တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်လည်း ထပ်ပါသေးတယ်ဗျာ အသစ်လေးဆိုပေမယ့် သူလည်း အချောလေးပါပဲ ဒီကားအကြောင်းမပြောခင် အဓိက ပြောရမှာက ဒါရိုက်တာပဲဗျ ဒါရိုက်တာကတော့ တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး ဘောလီဝုဒ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန်တစ်ခု တည်ထောင်ထားနိုင်တဲ့ Imtiaz Ali ပဲဖြစ်ပါတယ်အချစ်ကားများစွာကို ပုံဖေါ်ထားသူပီပီ အခုဇာတ်ကားလည်း Drama, Romance ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ယခု ၂၀၂၀ က လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှစ်ပုဒ်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြသသွားတာပါအချစ်နဲ့ အလုပ်ကြားက ပြဿနာတွေ မိသားစုအခက်အခဲတွေ ပတ်ဝန်းကျင် ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရိုးရာဓလေ့တွေနဲ့ အခြေနေပေါင်းများစွာကြားကဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ ယနေ့ခေတ် အချစ်ဇာတ်တစ်ပုဒ်ပါပဲ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး
Shazam Magic and Monsters 2020
2019 ခုနှစ်ကထွက်တဲ့ Lego Batman ရဲ့ Credit Scene မှာBilly Batson လေး Wizard ဆီ ရောက်သွားတဲ့အခန်း ပါခဲ့ပါတယ်။ဒီLegoကားကတော့ အဲဒီကားရဲ့အဆက်ပါ။ဒီထဲမှာတော့ Shazam အစွမ်းတွေရပြီး ဘီလီကကမ္ဘာကြီးကို ပိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားရင်းနဲ့ တစ်ရက်မှာ မထင်မှတ်ဘဲJustice League အဖွဲ့နဲ့ ဆုံမိတဲ့အခါမှာ အဖွဲ့သားတွေက သဘောကောင်းလွန်းတဲ့Shazam ကို အဖွဲ့ထဲ ဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတော့တယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Shazam ရဲ့ Villain တွေကို အကုန်လုံးနီးပါးထည့်သွင်းထားတာမို့လို့ DC fan တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် Lego ကားလေးပါ။Credit Scene လည်း ပါတာမို့ စောင့်ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
spree မင်းသားချော တိုက်ဂါးရဲ့ ၂၀၂၀ထွက် အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းကားကြီး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။တိုက်ဂါးဆိုတာနဲ့ အက်ရှင်အလန်းတွေကို ပြေးမြင်ကြမှာ လူတိုင်းပါပဲ။မကြာသေးခင်ကလည်း War မှာ လင်ပွားမင်းသားနဲ့အတူ အလန်းတွေ ချပြထားခဲ့တယ်။Baaghi ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လက်စားချေတဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့။အရင် Baaghi 1,2 ကတော့ ဇာတ်လမ်းချင်းတူပေမဲ့ Baaghiမှာတော့ မတူပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ ဖခင်ဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။အစ်ကိုကတော့ နုံနုံအအ ကြောက်တတ်တဲ့ ဗစ်ကရမ်၊ ညီကတော့ အစ်ကိုကို ထိရင် ငြိမ်မနေတတ်တဲ့ ရွန်နီသူတို့အဖေ ၊သူတို့အဘိုးဟာ ရဲအရာရှိတွေ၊ စံပြရဲသားကြီးတွေ။ဒါကြောင့် အစ်ကိုဖြစ်သူ ဗစ်ကရမ်ကိုလည်း ညီဖြစ်တဲ့ ရွန်နီက ရဲအရာရှိလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လူရှိန်အောင်သာ ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲ ဝင်ခဲ့တာ၊ တကယ်တော့ သူက ရာဇဝတ်သားတွေကို ကြောက်တတ်သူ။ဒီလိုနဲ့ ရဲအရာရှိဖြစ်လာတော့ မြို့နယ်အတွင်း ပြန်ပေးဆွဲဂိုဏ်းတစ်ခုကို ဝင်စီးရာကနေ ဗစ်ကရမ်ဟာ ပြန်ပေးဆွဲဂိုဏ်းရဲ့ ရန်သူဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီဂိုဏ်းဟာလည်း နိုင်ငံခြားသား အစွန်းရောက်တစ်ဦးရဲ့ လက်ပါးစေ အိန္ဒိယဂိုဏ်း၊ အာဏာကြီးသလို သတ်ဖြတ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်သူတွေ။ကြောက်တတ်တဲ့ နုံအအ ရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညီကိုအားကိုးနေရသူ ဗစ်ကရမ်ဟာ ဒီဂိုဏ်းသမားတွေနဲ့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်လာရမလဲ။ရွန်နီ ပြောနေကျစကားရှိတယ်။ “ငါ့ကိုထိပါးလာရင် ငြိမ်ခံတတ်ပေမဲ့ ငါ့အစ်ကို ထိပါးလာရင်တော့ လက်ပိုက်ကြည့်မနေတတ်ဘူး”တဲ့။ရွန်နီကရော ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ကယ်တင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို အက်ရှင်အလန်းအစားတွေနဲ့အတူ မင်းသမီးချောချောလေးနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
The Longest War 2020
The Longest War (2020) ====================================== မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ The Longest War ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Documentary ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် စကားပြောတွေနဲ့ ပြန်လည်ရှင်းပြ ထားတာတွေပါဝင်ပေမယ့် သမိုင်းကေကြာင်းကို သေသေချာချာသိရပြီး ကြည့်ရတာ မပျင်းမဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကမ္ဘာမှာအရှည်ကြာဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲအကြောင်း အင်အားကြီးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်က အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်း အမေရိကန်စစ်တပ်က အာဖဂန်မြေပေါ်ကနေ ဆိုဗီယက်တွေကို တိုက်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေ တာလီဘန်နဲ့ပါကစ္စတန်တို့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အလိုရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက ်တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင် အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို အမေရိကန်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ စစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေ နောက်ဆုံးမှာ အမေရိကန်အစိုးရက ဒီအရှည်ကြာဆုံးစစ်ပွဲကြီးကို အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေနဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တ ဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းကို ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
1970 ခုနှစ် Miss World ပြိုင်ပွဲနဲ့ပက်သတ်ပြီး ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။Feminist Comedy ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားကြီးစိုးမှုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ လုပ်ရာကနေ စတာပါ။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် မယ်ကမ္ဘာရွေးပွဲအတွက် နိုင်ငံအသီးသီးကအချောဆုံးအလှဆုံးတွေက ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ စုရုံးနေကြပါပြီ။မယ်ရွေးပွဲမှာလည်း လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေက ရှိနေပြန်တယ်။ဒီကြားထဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်း ကြုံနေပြန်။ဒီလိုအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကနေ Miss World ပြိုင်ပွဲကြီးကိုယောက်ျားကြီးစိုးမှုဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ တားဆီးကြတဲ့အကြောင်းဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Endings Beginnings 2020
Endings, Beginnings(2020)နာမည်ကျော် မင်းသမီး Shailene Woodley ကိုယ်တိုင်အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးFifty Shades ထဲက မင်းသား Jamie Dornan နဲ့ Marvel ကားတွေနဲ့ လူသိများခဲ့တဲ့Sebastian Stanလည်း ပါဝင်ထားလေတယ်… IMDB raiting 5.7 ရထားတဲ့ Drama ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ..ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဒက်ဖနီဆိုတဲ့ကောင်မလေးက သူ့ကိုအရမ်းချစ်ဂရုစိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးအေဒီရီရန်ကိုလမ်းခွဲလိုက်တယ် ….အကြောင်းအရင်းကတော့သူရှုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကြောင့်ပဲ …အရမ်းချစ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ချစ်သူကို လမ်းခွဲဖို့ဆုံးပြီးတဲ့အကျိုးဆက်က သူမအတွက် မလွယ်ကူလှဘူး…ချစ်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရပေါင်းများစွာကို ပြေပျောက်ဖို့အတွက် အရက်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်…အချိန်တစ်ခုရောက်တော့ ဘဝသစ်နဲ့ပျော်ရွှင်အောင်နေဖို့ရာ အရက်တွေဖြတ် ရည်းစားမထားဘဲ အလုပ်တွေကြိုးစားပြီးနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့အစ်မအိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်…အစ်မ အိမ်ကိုရောက်ပြီး ဘဝပြန်စမယ်ဆိုခါမှသူမ မထင်ထားတဲ့အရာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်တော့တာပဲ…ကိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
The Roads Not Taken(2020)လီယိုဆိုတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရှိတယ်…ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့သမီးလေးရှိပေမဲ့ စာရေးတဲ့နေရာမှာ အာရုံစူးစိုက်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးမိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားတယ်…. ဒီလို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် မိန်းမနဲ့ကွဲခဲ့ရသလိုသမီးလေးဟာလည်း သာမန်မိန်းကလေးထက်ဘဝကို ခက်ခဲစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်… အဲ့ဒီနောက် လီယိုတစ်ယောက် အသိစိတ်လွတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ ရောဂါသည်ဖြစ်သွားတယ်…ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သမီးဖြစ်သူသာ စောင့်ရှောက်ဖို့ကျန်တော့တယ်…သမီးဖြစ်သူမော်လီတစ်ယောက် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရမလဲ….မိသားစုမှာ အဓိကနဲ့သာမည ခွဲခြားတတ်ဖို့နဲ့ ရုန်းကန်ရတဲ့ဘဝတွေဟာတစ်ချို့သူတွေအတွက် အရမ်းခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကို ပညာသားပါပါလေးပြသွားတယ်…No Country for Old Men နဲ့ အော်စကာရခဲ့တဲ့ Javier Bardem က ဖခင်ဖြစ်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးMaleficent ထဲက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေးလူသိများခဲ့တဲ့ Elle Fanning ကသမီးလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..ခံစားကြည့်ကြပါဦး …
Bloodhound(2020) အလွတ်စုံထောက် အေဘယ်ဝေါ့ကာဟာ ကင်မရာမန်း ဂျင်ကိုအမှုစုံစမ်းရာမှာ ကူညီဖို့ ငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ပူးပေါင်းပြီး မကြာခင်မှာပဲအမှုတစ်ခု လိုက်စရာ ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဘီလ် ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်း မာရီယာ ပျောက်ဆုံးမှုကို လိုက်လံစုံစမ်းရမှာပါ…ဒီပျောက်ဆုံးမှုကိုစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာ ထင်ထားတာထက် ပိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့..ဒီနောက်မှာတော့ …. ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?????စုံထောက်ဇာတ်ကားကို မှတ်တမ်းတင်ရင်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး ရိုက်ထားတဲ့အတွက် ကြည့်ရတာတစ်မျိုး အမြင်ဆန်းနေမှာပါ။ အသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ရှေ့ဆက်ဘာတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။
Psycho (2020) ============================= ဒယ်လ်ဂီနီဆိုတဲ့ ရေဒီယိုကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ကောင်မလေးကို ဂေါ့သန်ဆိုတဲ့ မျက်မမြင်ကောင်လေးက သဘောကျပြီး အနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတတ်တယ်။ ဒယ်လ်ဂီနီကတော့ ဂေါ့သန်ဟာနာမည်ကြီး အနုပညာရှင်မှန်းမသိပဲ အနောက်ကလိုက်နှောင့်ယှက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့သာ သဘောထားခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်တွေကိုသိသွားတဲ့ ဒယ်လ်ဂီနီက ဂေါ့သန်ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင် ဂေါ့သန်ကိုမွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်ခွင့်ပေးမယ့်အကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုအင်ဘာတိုးမြို့မှာ မိန်းကလေးတွေကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်တဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုက ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ရဲတွေကမဖော်ထုတ်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကံဆိုးစွာနဲ့ ဂေါ့သန်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ ဘူတာရုံမှာစောင့်နေတဲ့ ဒယ်လ်ဂီနီတစ်ယောက် လူသတ်သမားရဲ့ ပြစ်မှတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။ ဂေါ့သန်ကရော ဒယ်လ်ဂီနီညွှန်းတဲ့နေရာကို ရောက်အောင်လာပေမယ့် ဘာတွေလွဲချော်သွားခဲ့လဲ။ လူသတ်သမားကရော မိန်းကလေးတွေကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။ မျက်မမြင်‌လေးဂေါ့သန်က ဒယ်လ်ဂီနီကို လူသတ်သမားလက်ကနေ ကယ်ထုတ်နိုင်မှာလား ဆိုတာကို ဒီ psycho 2020 ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရင်း အဖြေရှာလိုက်ရအောင် …..
Ella Bella Bingo(2020)ကလေးဘဝတုန်းက ကျွန်မတို့တွေ သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းခင်တဲ့အကြောင်းတွေဝန်မခံခဲ့မိကြပေမဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကများ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ ဝင်လာခဲ့ရင်ကိုယ့်ထက်ပိုခင်သွားမှာကိုတော့ တိတ်တဆိတ်စိုးရိမ်ခဲ့ကြတယ်မလား….ဒီ Animation ကားလေးထဲမှာလည်း Ella နဲဲ့ Henry တို့သိပ်ခင်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပေါ့… သိပ်ခင်တဲ့ သူတို့အကြားကို တခြားမြို့ကပြောင်းလာတဲ့ သူဌေးသားလူပေါ်ကြော့လေး Jonny တစ်ယောက်ရောက်လာပါတော့တယ် ..Jonny ဟာပိုက်ဆံချမ်းသာပေမယ့် မိဘတွေကအလုပ်ကြောင့်နေရာခဏခဏပြောင်းရတာမို့သူငယ်ချင်းအတည်တကျမရှိတဲ့ကောင်လေးပါ..Henry ကိုတွေ့ပြီးတော့ သဘောကျသွားပြီ သူနဲ့သူငယ်ချင်းလုပ်ဖို့မျိုးစုံကြိုးပမ်းပါတော့တယ် ..တစ်ဖက်မှာလည်း သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကို သူများဆီအပါမခံနိုင်တဲ့ Ella နဲ့ Henry ကိုသူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ Jonny တို့ရန်ဖြစ်စကားများပြီးပြဿနာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတော့တယ်…ဒီ Animation ကားလေးက တကယ့်ကိုချစ်စဖွယ်ပါ..သူငယ်ချင်းတွေအကြား ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြထားသလို ပြဿနာတွေကြုံရင်လည်း ဘယ်လိုဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဟာသလေးတွေပေါင်းစပ်ထည့်ရင်းပြသားထားပါတယ်…အဆုံးထိကြည့်ချင်သွားအောင် ချစ်စဖွယ်ဇာတ်ရုပ်လေးတွေပါဝင်တာမို့ တပျော်တပါးကြီး ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါဦးလို့…
Hacked(2020)ဆမ်မီရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ပါ…စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သိပ်လှတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းပိုင်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုရလေတော့ခုခေတ် Social Media ကိုလည်း လူသိများစေဖို့ နည်းလမ်းစုံအသုံးပြုတတ်တယ်…တစ်နေတော့ သူမကိုကောင်လေးတစ်ယောက်က ကြွေသွားတယ်… ဒီကောင်လေးက အသက်သာငယ်ပေမဲ့ အရမ်းတော်တဲ့ဟက်ကာတစ်ယောက်…ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတ္တတစ်ခုသာသိတဲ့ ဒီကောင်လေးဟာ သူအကျွမ်းကျင်ဆုံးဟက်ကာပညာရပ်တွေနဲ့စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့လောကဝတ်တွေကိုဘေးချိတ်ပြီး နည်းမျိုးစုံသုံးကာ ဆမ်မီရာကို လိုက်ပါတော့တယ်…ဆမ်မီရာတစ်ယောက်ကို ဒီကောင်လေး ဘယ်လိုတွေ ချဉ်းကပ်လဲ…သူချဉ်းကပ်တဲ့နည်းတွေကရော ဒီကောင်မလေးအတွက်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ…ကောင်မလေးကရော ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ…သူမကရော ဒီလိုမျိုးချဉ်းကပ်တဲ့ကောင်လေးကိုဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ…ဒီဇာတ်ကားက ဒီဘက်ခေတ်နဲ့အတော်လိုက်ဖက်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်…မိန်းကလေးတွေအတွက်ပညာပေးကားဖြစ်သလိုဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို ခပ်မိုက်မိုက်ပြသွားတာပါ…
နယူးယောက်မှာ မစ္စတာ ကာတွန်းနဲ့ အက်စတီဗင် ဆိုတဲ့ မက္ကဆီကန်နွယ်ဖွား ဘဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်မစ္စတာ ကာတွန်းက တက်တူးထိုးတယ် ပန်းချီဆွဲတယ် အက်စ်တီဗင်က ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်Snoop Dogg တို့ Eminem တို့လို နာမည်ကြီးတွေကို တက်တူးထိုးပေးတဲ့ တက်တူးဆရာ သူကအစကကားဆေးမှုတ်တာကနေ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ဖက်ကနေ တက်တူးဖက်ရောက်လာတယ်သူတက်တူးထိုးတာတွေကို အက်စတီဗင်က မှတ်တမ်းတင်တယ် အက်စတီဗင်က ဓာတ်ပုံဆရာအပြင် Eminem တို့လိုနာမည်ကြီးတွေရဲ့ မြူးဇစ် ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ဒါရို်က်တာလုပ်တယ်Netflix က ပြတဲ့ ဒီ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ထားတာပါဒီထဲမှာ သူတို့ဟာ လော့အိန်ဂျယ်လိစ်က ဂရပ်ဖီတီ ယဉ်ကျေးမှုတွေလိုးရိုက်ဒါ ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ ဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ အယ်လ်အေက အောက်ခြေဘဝတွေ အထက်တန်းစားဘဝတွေဂိုဏ်းစတားလောကတွေ နဲ့ ဟစ်ဟော့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကျန်ခဲ့သေးတယ် ကားသူခိုးလို့သိကြတဲ့ GTA ဂိမ်းက သူတို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ
Walkaway Joe(2020)Dallas တို့ သားအဖ (၂)ယောက်ဟာ ဘိလိယက်ထိုးဝါသနာပါကြတယ်….အဖေဖြစ်သူဟာ ဘိလိယက်ဝိုင်းတွေတိုင်း သားဖြစ်သူကိုခေါ်သွားတတ်တဲ့အပြင်အရွယ်မရောက်ခင် လူကြီးတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေပါခိုင်းလေ့ရှိတယ်…ဒီလိုမျိုးပြုစုပျိုးထောင်မှုကို အမေဖြစ်သူက စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လို့ အမြဲစကားများလေ့ရှိတယ်… သီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံး အဖေဖြစ်သူဟာ အိမ်ကထွက်သွားတယ်….အမေ့ရဲ့ခံယူချက်တွေကို မကြိုက်တဲ့Dallas လည်း အဖေဖြစ်သူကိုရှာဖွေဖို့ အိမ်ကထွက်သွားတယ်…Dallas တစ်ယောက် ဒီလိုထွက်သွားစဉ်မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်…အဲ့ဒီသူနဲ့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ…အပြင်လောကကြီးဟာ ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေလဲ…လူတိုင်းဟာ ပြဿနာကိုယ်စီကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတာကိုဒီကားလေးက ကောင်းမွန်စွာပြသပေးသွားပါတယ်…ခံစားကြည့်ကြပါ
အခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ။လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာကိုလုပ်ဆောင်လိုစိတ် ပြင်းပြမှုကို မြင်တွေ့ရမယ်။လူငယ်တွေဆိုတာ ကိုယ်အားသာရာကို သိရဖို့ အရာရာကို စမ်းကြည့်တတ်ကြတာပါပဲ။တစ်ချို့ကတော့ လမ်းပျောက်နေကြတာလို့ ပြောကြတယ်။ အဲ့ဒီလူငယ်တွေထဲမှာ Elijahလည်း အပါအဝင်ပဲပေါ့။Elijah ရဲ့အဖေက မိသားစုအမွေ စားသောက်ဆိုင်ကို ဦးစီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူက Elijah ဆီ စားသောက်ဆိုင်ကို လက်လွှဲပေးချင်တာပေါ့။Elijah မြတ်နိုးမိသွားတာကတော့ ဝိုင်ကျွမ်းကျင်မှု ပညာရပ်။သူုဖြစ်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းသွားမလဲ။အားပေးမှုတွေရသလို နားလည်မှုအလွဲတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေလည်း ရှိလာမယ်။လူငယ့်စိတ်သဘောအရ စိတ်အပြောင်းအလဲတွေ မချင့်မရဲဖြစ်တာတွေလည်း ရှိဦးမှာ။ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သားအဖနှစ်ယောက်ကြားက ဆက်ဆံရေးကိုလည်း လှလှလေးဖော်ပြထားတယ်။နောက်ပြီး ဝိုင်လောကကို အခြေတည်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ဝိုင်ဝါသနာအိုးတွေအတွက် သဘောကျစရာပါ။IDMB 6.4 ရထားပြီး Drama အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
Operation Parindey(2020)ဒီဇာတ်ကားဟာAction, Drama, Thrillerအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးရောက်လာတဲ့ရာဇဝတ်သားကိုလောယာဥ်ကွင်းတွင်ဖမ်းမိကာအချုပ်ချထားရာရုတ်တရက်ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အတုတွေရောက်ရှိလာပြီးအကြမ်းဖက်သမားအပါအဝင်အခြားအကျဥ်းသားတွေ ကိုကယ်ထုတ်သွားကြပါတယ်။ လန်ဂါခေါ် အစားအသောက်ပွဲစီစဥ်နေကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလဲဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်ပဲရုတ်တရက်ဒီလိုဖြစ်လာတာကြောင့်မတားဆီးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး အထက်အရာရှိကြီးရဲ့အမိန့်အရဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖို့နဲ့ ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လျှို့ဝှက်စုံထောက် အဘီမာနဗ်က ၂၄နာရီနဲ့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းမှာပဲကြည့်ရှုပေးကြပါလို့
Scarface ရုပ်ရှင်တို့ ကမ္ဘာကျော် လူဆိုးကြီး အယ်ဖွန့်စ် ကပုန်း တို့ကို သိကြတဲ့သူတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကလည်း ကပုန်းရဲ့ ဘဝကို သရုပ်ဖော်ထားတာပါပဲ။ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကြမ်းခဲ့ရမ်းခဲ့တဲ့ ကာလတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။အယ်ဖွန့်စ် တစ်ယောက် အခွန်ရှောင်လွှဲမှုနဲ့ ထောင် ၁၀ နှစ် ကျခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ သူ့ဘဝ နောက်ဆုံးအချိန်တွေ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။မင်းသားကတော့ စွယ်စုံရတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ နာမည်ကျော်တွေ စာရင်းထဲက တစ်ယောက်ပါပဲ။တွမ် ဟာဒီ ဖြစ်ပါတယ်။Bane, Venom, Mad Max တို့ အပါအဝင်ကမ္ဘာကျော်ကားတွေမှ အများကြီးပါပဲ။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်း ကာလသားရောဂါကြောင့် ဦးဏှောက်ထိခိုက်တဲ့အပြင်လေပါဖြတ်သွားတဲ့ ဂန်းစတားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုပီပီပြင်ပြင် ပုံဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိက အချက်ကတော့အယ်လ် ကပုန်း ထောင်မကျခင်မှာ ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပြဿနာကို အခြေခံထားပါတယ်။ကပုန်းကို တကယ်ရူးနေတယ်လို့ မယုံသေးဘဲ စောင့်ကြည့်နေတဲ့အက်ဖ်ဘီအိုင်တွေ၊ သူ့ဘေးက မိတ်ဆွေစစ်တွေ၊မိတ်ဆွေတုတွေ နဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ ဘဝကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်အကြောင်းတွေ ဆက်စပ်ပြီး ပါနေတာမို့Scarface ရုပ်ရှင်လေးကို ကြည့်ထားပြီးမှ ဒါကိုကြည့်ရင် ပိုပြီး နားလည်ခံစားလို့ရမှာပါ။
18 Presents (2020) ============================ ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါကတော့ မိသားစုဒရမ်မာကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားနာမည်လေး လက်ဆောင်ဆယ့်ရှစ်ခုဆိုတဲ့အတိုင်း အယ်လီဆာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးက သူ့သမီးလေးအန်နာကို ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ထိ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာက အယ်လီဆာမှာကင်ဆာရှိနေတဲ့အတွက် အန်နာလေးကိုမွေးပြီးရင်သေမှာပါ။ သူမသေခင်သမီးဖြစ်သူအတွက်မွေးနေ့လက် ဆောင်တွေကြိုပြီးထားခဲ့တာပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အန်နာလေးကသူ့အမေရဲ့ လက်ဆောင်တွေကိုငြီးငွေ့လာပြီး ဘာလို့ဒီလိုတွေထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ဘဲ စိတ်ဆိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့လောကကြီးကိုရော အဖေဖြစ်သူကိုရောအရွဲ့ တိုက်ပြီးနေပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့သူ့အဖေနဲ့စိတ်ဆိုးပြီး အိမ်ကထွက်လာခဲ့ရာက ကားတိုက်ခံရပြီး ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ သူမမွေးခင်အချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အမေဖြစ်သူ အယ်လီဆာနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာတွေ့ရပြီး ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေ ဆက်တိုက်တွေ့ရပါတော့တယ်။ သူ့အမေဖြစ်သူနားမှာနေရင်း သူ့အမေရဲ့သဘောထားတွေကိုနားလည်ပြီး စိတ်ဆိုးပြေနိုင်ပါ့မလား၊ သူ့အမေရဲ့မိခင်မေတ္တာကို နားလည်နိုင်ပါ့မလား၊ သူ့အဖေကိုရော နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာကြည့်ရှုရမှာပါ။ မိခင်မေတ္တာကြီးမားပုံတွေ သူတို့ရင်သွေးလေးအတွက် အရာရာပေးဆပ်ပုံတွေကို တစ်၀ကြီးကြည့်ရှုခွင့်ရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် …
The wrong missy (2020) က Netflix ကနေအသစ်ထွက်လာတဲ့romantic comedy ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ဘဝမှာ စိတ်ကူးနဲ့ လုပ်ချင်ပြီး မလုပ်ဖြစ်တာတွေအများကြီး ကြုံဖူးကြမှာပါ။မစ်စီကတော့ အဲဒီလိုလူမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး တွေ့ဖူးတဲ့လူနဲ့ sex အကြောင်းပြောဖို့ဝန်မလေးသလို တစ်ဖက်လူကဘယ်လိုတွေးနေမလဲ စိတ်မပူတတ်တဲ့လူမျိုးပါ။တစ်ခါမှ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ မနေသလိုသူတန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေအတွက်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့လည်း အသင့်ပါပဲ။သူ့ရဲ့စိတ်က လွတ်လပ်လွန်းလို့ လူတွေကသူ့ကိုရူးနေပြီ‌လို့တောင် ထင်ကြတဲ့အထိပါပဲ။အမြဲတမ်း တစ်လွဲတွေ လုပ်ပေမယ့်တကယ်ရေးကြီးလာတဲ့အခါ အားလုံးကိုကယ်တင်ပေးမယ့် လူမျိုးပါ။ အိတ်ထဲမှာလည်းဓားမကြီးတစ်လတ် အမြဲဆောင်ထားပြီးဘွဲ့ ၅ ခုလောက်ယူထားတဲ့ master brain ပါ။ရုပ်ဆိုးသလောက် ထက်မြတ်နဲ့strong & independent woman လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာဝိုင်အီကမ်းခြေက ရှုခင်းတွေနဲ့ တစ်လွဲတွေ တောက်လျှောက်လုပ်တတ်တဲ့မစ်စီက အိမ်ထဲမှာနေပြီး မွန်းကြပ်နေသူတွေလိုအပ်နေတာနဲ့ ကွက်တိပဲလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
False Colors (2020) ======================================= အီရပ်မှာ လက်နက် ရှာဖွေရေး တပ်မှာ လုပ်နေတဲ့ စစ်သား တစ်ယောက်က မူမမှန်တဲ့ ကုန်သေတ္တာနဲ့ အဲ့ထဲက လက်နက်တွေကို တွေ့သွားပါတယ်။ အဲ့လို တွေ့ပြီး နောက်နေ့မှာပဲ အိမ်ဖြူတော်က အရာရှိ‌ရောက်လာပြီး သူတို့ကို အဲ့ကနေ ချက်ချင်း ထွက်သွားခိုင်းပြီး သူတို့ ‌တွေ့ခဲ့သမျှ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ်ပြီး အဲ့နေရာ ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ နောက် တော့ စစ်သား နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်ကပဲ ကံကောင်းပြီး စစ်တပ်ထဲကနေ ထွက်ပြေးလိုက်နိုင်ပါတယိ။ ကျန် တစ်ယောက်ကတော့ နှုတ်ပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ လွတ်သွားတဲ့ တစ်ယောက်က သူတွေ့ခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်စုံစမ်းပါတော့တယ်။ နောက်တော့ သူသိလာရတာက နိုင်ငံတော်အဆင့် ဇီ၀ လက်နက် ကုန်သွယ်ရေး ဆိုတာကိုပဲ သိလာရပါတယ်။ အဲ့နောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ သူရော အသက်ရှင်နိုင်မလားဆိုတာ ကြည့်ရမယ့် ကားကောင်းလေးပါ …
Panance Lane (2020) ========================================== ဒီတစ်ခါတော့ သည်းထိပ်ရင်ဖိုကား ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွေးသံတရဲရဲကားကို ကြည့်ချင်သူတို့အတွက် ကားကောင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရစ်ဆန်ဆိုတဲ့ ထောင်ထွက်ဟာ အကျဥ်းထောင်မှာ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အကူအညီတောင်းမှုကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ နယ်မြို့လေးမှာ ဖွက်ထားခဲ့တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ပိုက်ဆံကို သွားရှာပြီး သူငယ်ချင်းအတွက် ကလဲ့စားချေပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ နယ်မြို့လေးကို ထောင်က ထွက်ထွက်ချင်းပဲ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့မြို့က အိမ်အပျက်တစ်လုံးကို ပြင်ဆင်ပေးဖို့ အလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခရစ်ဆန်ဟာ သူရောက်နေတဲ့အိမ်ဟာ သာမာန်အိမ်မဟုတ်တဲ့အပြင် သူလက်ခံမိတဲ့ အလုပ်ဟာလည်း ရိုးသားမှုမရှိတာကို တဖြည်းဖြည်း ရိပ်မိလာပါတော့တယ်။ သူရောက်နေတဲ့ မြို့ကလူတွေကလည်း မြို့အတွက် တစ်ခုခုကို ဖုံးအုပ်ပေးနေသလို ကြောက်နေသလို ခံစားလာရပါတယ်။ ခရစ်ဆန်တစ်ယောက် သူရဲ့ တာဝန်ကို ပြီးမြောက်နိုင်ပါ့မလား။ အိမ်ကြီးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုရော ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားကောင်းလေးမို့ လက်မနှေးပဲ ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။
ကဲ Bollywood ပရိသတ်ကြီးအတွက် စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ရုံတင်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ Malang ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ2020 မှာ အတော်လေးအောင်မြင်လူကြိုက်များသွားတဲ့ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူးမင်းသားချော အဒီသ်ယားနဲ့ မင်းသမီးချော ဒေရှားတို့ကိုကတော့ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တိုင်းသိကြမှာပါသီချင်းတွေကလည်း စောက်လန်းတွေချည်းပါပဲRomance, Thriller ကားကောင်းတစ်ကားပီပီ ဇာတ်လမ်းကလည်း မြုပ်ကွက်တွေနဲ့ စလည်အဆုံးဆွဲခေါ်သွားမယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ် ဒါကြောင့် စပွိုင်းအမိမခံပါနဲ့ (ကြည့်ပြီးသူများလည်း ဇာတ်ကြောင်းမပြောကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ)ဇာတ်လမ်းလေးကတော့”လူသတ်မှုတစ်ခု တိုင်ချက်ဖွင့်ချင်လို့ပါ ဆရာ””မင်းပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာက ရဲစခန်းမှာတိုင်လိုက်လေကွာ”“မဖြစ်သေးပါဘူး ဆရာ အခုမှကျူးလွန်မှာမို့လို့ပါ” ဒီလိုဖုန်းကောလ်တစ်ခု စခန်းမှူး အာဂရှိစ်ထံဝင်လာခဲ့ပါတယ်အာဂရှိစ်ဆိုတာကလည်း ရာဇဝတ်သားမှန်သမျှ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေ့လို့ဆိုပြီး အသေချည်းဆော်တဲ့ရဲတစ်ယောက်ပါ ဆေးချပြီး အမြဲကောင်းနေသူပေါ့တစ်ဖက်က သူ့ကို နောက်သလိုလို စိန်ခေါ်သလိုလိုနဲ့ ဝင်လာတဲ့ဖုန်းဆက်သမားနဲ့ အာဂရှိစ့်တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြလေသောအခါဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ခံစားကြည့်ကြပါဇာတ်လမ်းအများကြီးမပြောတာ စပွိုင်းမိသွားမှာစိုးလို့ပါ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့IMDb 6.7/10 နဲ့Rotten 67% အထိရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါ
CM Fan တွေအတွက် ပေါ်တူဂီရုပ်ရှင်ကားသစ် တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်…ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယို မြို့ ရဲ့ နောက်ခံ အလှ နဲ့အရမ်းလှပတဲ့ အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တစ်ခုအကြောင်းပေါ့… အချစ်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးဆိုတာ ယုံလား ?တက်ကို ဆိုတဲ့ သူဌေးလေးဟာသူ့အဖေက အရမ်းချမ်းသာလွန်းလို့ဘော့ကျော့နေပြီး တစ်မြို့လုံးကကောင်မလေးတွေ နဲ့ ပတ်ပြီး အိပ်နေတာပေါ့ရီယို နဲ့ နီးတဲ့ တောင်ယာစိုက်ခင်းတွေ ရှိတဲ့ဘက်ကခရမ်းချဉ်သီးမင်းသားလေး လို့နာမည် တွင်တယ် တစ်မြို့လုံးကအရွယ်ရောက်ပြီး ကောင်မလေးတိုင်း ဟာတက်ကို လို နာမည်ကြီး ရုပ်ချောသူဌေးသားလေး နဲ့ စုံတွဲခုတ်ချင်ကြတာပါအဲ့ဒီ တစ်ဖက်က ရီယိုမြို့မှာတော့ဆေးကျောင်းသူလေး ပေါ်လာ ဟာဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း နဲ့တစ်ရက်မှာ ပေါ်လာ ရဲ့ သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးမြို့ကို ရောက်လာပါတယ်…ကံဆိုးစွာပဲ အဲ့ဒီနေ့မှာ မတော်တဆ မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူဌေးသားလေး တက်ကို နဲ့ ဆရာဝန်လောင်းမလေးပေါ်လာ တို့ ဆုံမိကြတာပဲ…ပေါ်လာ ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်သွားတဲ့ တက်ကို ကတော့သူ့ပိုက်ဆံတွေကြောင့် ပေါ်လာ ရဲ့ အချစ် စစ်ပါ့မလားဆိုပြီးဆင်းရဲချင်ယောင် ဆောင်ပြီး လိမ်ထားလိုက်ပါသတဲ့…လူငယ်တွေ ရဲ့ နှလုံးသားရေးရာ ဟာ ထူးဆန်းတယ်တက်ကို လို ဘော့ကျော့သူဌေးသားဟာ ပေါ်လာအတွက်အိမ်သာလဲ ဆေးနိုင် အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေအကုန် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆင်းရဲသားလေး အဖြစ်ပြောင်းလဲ သွားနိုင်တယ်….ဒါပေမဲ့ ပေါ်လာ မသိအောင် သူဌေးသား ဘဝကိုရေရှည် ထိန်းထားနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့…..ဒီရုပ်ရှင်ကား ဟာ ဗမာကားဆန်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ အရမ်း ရိုမန့် ဖြစ်တဲ့ အတွက် စောင်ကိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ Admin ကတော့ ညွှန်းချင်ပါတယ်…
Becoming (2020) =============================== ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကားကတော့.. 2018 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ မစ်ချယ် အိုဘားမားရဲ့… life story စာအုပ်အကြောင်းကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့… Documentary ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ.. ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ. သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့.. အကြောင်းအရာတွေ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေ ပြီးတော့.. သူမ ဘဝဘယ်လိုဖြစ်တည်လာသလည်းဆိုတာတွေ သူမရဲ့ ဘဝအခြေအမြစ်တွေ.. သူမဟာမိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဘယ်လိုနေထိုင်ရတာတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပြီး… သူမရဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အာဇာနည်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေရယ်.. အဲ့ဒီလိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့သူဘယ်လိုတွေ သူ့ကိုသူပြုစုပျိုးထောင်လာခဲ့ရသလည်းဆိုတာ…. လူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းလာရငလည်းဆိုတာ… ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလည်း… လူတွေကရောသူ့ကို ဘယ်လိုတွေထင်မြင်ကြလည်းဆိုတာကို.. record action နဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပေးတာကြောင့်.. ဘဝအတွက် ခွန်အားတွေဘယ်လို ယူရသလည်းဆိုတာကို… ဒီဇာတ်ကားလေးကနေပြီးတော့ ပြသသွားမှာပါ…
Dragon Soldiers (2020) ======================================= စွန့်စားခန်း ဇာတ်ကားတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်တတ်သူတွေအတွက် အတော်အတန်ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ကားလေးပါ။ မြို့ငယ်လေးရဲ့ ဒဏ္ဏာရီလာ မွန်းစတားတွေရယ် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ တပ်ပြန်တွေရယ် အိမ်ခြေယာမဲ့တွေရယ်ကို ဆက်စပ်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မြို့တော်ဝန်ကနေပြီးတော့ bold eagles လို့ခေါ်တဲ့ soldier of fortune လို့ မြို့ထဲကလူတွေခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကို ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ တောထဲကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ထွေလာတွေမှာပါတဲ့အတိုင်း မြို့ငယ်လေးရဲ့ ဒဏ္ဏာရီလာနဂါးတစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ကြပြီးတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ။ တကားလုံး မိန်းမဆိုလို့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းမိုက်ပြီး ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးမှ မင်းသမီး တစ်ယောက်တည်းပါတာကိုသတိရတယ်။ အရမ်းမိုက်ပါတယ်နော်။ စွန့်စားခန်းကြိုက်သူတွေကို recommended ပေးပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးက Musical Romantic Comedy ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေးပါ။ အရမ်း Sweet ဖြစ်ပြီးတော့ ရိုထားတဲ့ ကားလေးပါ။ရယ်လည်းရယ်ရသလို တစ်ကားလုံးလဲ သီချင်းလေးတွေနဲ့ တကယ် နားထောင်ပြီး ကြည့်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။တောင်ကြားမြို့လေးထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေက ဖက်ရှင်ဆိုလဲဆင်တူ ဝတ်ကြတယ်။ ဘဝကို ပျော်ပျော်ပဲဖြတ်သန်းကြပေမယ့် အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့အထက်တန်းစားယောက်ကျားမှဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ အဲ့ထဲမှာမှ ဂျူလီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက တစ်မူထူးခြားတယ်။ရှေးရိုးစွဲ မဆန်ချင်ဘူး …အချစ်ကိုကိုးကွယ်သလို ဘယ်လိုအတန်းအစားပဲနေနေ ချစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အသင့်ပဲဆိုပါတော့…။ အဲ့ဒီလို ကောင်မလေးနဲ့ မိဘမရှိ တေလွင့်နေတဲ့ရမ်ဒမ် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတို့ ကမ်းခြေမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်…မတူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က မွေးဖွားခဲ့ကြသလိုအယူအဆတွေလည်း ကိုယ်စီကွဲပြားကြလေတော့ ရေရှည်မှာ အချစ်ကိုအရင်းတည်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဟန်ချက်ညီစွာလျှောက်လမ်းဖို့ အတော်ခက်တယ်ပြောရမယ်….ကိုင်းသူတို့ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ကြပါ
နောက်ထပ် stay home ကာလကိုအဖော်ပြုပေးမယ့်18အကျော် 19အပေါင်း ကားလေးလာပါပြီ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိကောင်ဇိုးလေးတစ်ယောက်သူဆော်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ရာကစပါတယ်။ သူအိမ်အပေါ်ထပ်မှာက မမတစ်ယောက်နေတယ်။အဲ့မမကလည်းသူပါတနာနဲ့ လိုအင်ဆန္ဒမပြည့်ဝခဲ့တာကြာပြီပေါ့။မမကစိတ်ကြီးသလောက် သူပါတနာကသုံးစက္ကန့်ကိုကိုဖြစ်နေတယ်။ကောင်ဆိုးလေးကလည်းလက်ကြောသာမတင်းတာကျန်တဲ့နေရာတွေတင်းလွန်းတော့ သူဆော်လေးကတောင်လက်မြောက်အရှုံးပေးနေရတာပေါ့။အဲ့လိုကောင်ဆိုးလေးနဲ့ သူဆော်လေးဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်။ထန်လွန်းတဲ့ မမကြီးကကော သူဆန္ဒတွေပြည့်ဝဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားယူမယ်ဆိုတာ နည်းနာလေးယူလိုက်ကြပါအုန်း။၁၈ အပေါင်းဆိုပေမယ့် မပြတ်မသားဝါးတားတားလေးမှတမျိုးဆွဲဆောင်မှုရှိတာမလား။အဓိကကတော့ ဆန္ဒမပြည့်ဝရှာတဲ့ မမကြီးကလည်းတက်တူးတွေနဲ့ လန်းလွန်းသလိုမခို့တရို့ဆော်လေးကလည်း ငယ်ငယ်နုနုထွတ်ထွတ်လေးဆိုတော့ကြည့်ရတာအားရမှာပါ။ဆော်ကြီးရဲ့သိုင်းကျမ်းဗြူဟာတွေကလန်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။မမကြီးတွေရဲ့သိုင်းကွက်တွေသိချင်ရင်ဒီမှာသာလေ့လာလိုက်တော့။ညီမလေးတွေကိုချုပ်မယ်ဆိုရင်လဲပညာယူလို့ရတယ်။တပ်ထွက်တွေလည်းအားငယ်စရာမလိုဖူး။နည်းနာပိုင်ရင် ဆော်ချောချောလေးရနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာလေးမိုတီထည့်ပေးထားတယ်။ကဲ အပိုမပြောဖူး။ဆော်တွေရှယ်မှကြိုက်ရင်မြန်မြန်သာဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါတော့။
တွေးခေါ်နိုင်မှုနည်းပါးတဲ့ ဟွီနဲ့ဂန်မင်ဂူဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သေသေကြေကြေတိုက်ခိုက်နိုင်တာကတော့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ပါတဲ့ဒီလိုသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ပေါင်းသင်းနေရတဲ့ ဂျောင်မန်ဟာသူတို့၃ယောက် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပိုက်ဆံရှာနိုင်ဖို့လူသားသဲအိတ်အဖြစ် ဟွီ မင်ဂူတို့နဲ့အတူအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီး နေ့စဉ်နေထိုင်ကြတယ်ဒီလိုလူသား၃ယောက်ဆီကို ငယ်သူငယ်ချင်းအင်ယူယောင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့အတူပိုက်ဆံအများကြီးပိုရှာနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့အတူရောက်လာခဲ့တဲ့ယူယောင်းနဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့နောက်ကွယ်က လောင်းကစားခန်းမှာဘယ်လိုဒုစရိုက်တွေရှိနေမလဲစတင်ပြီးရင် အဆုံးသတ်မရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာဒီဇာတ်ကားထဲမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁နှစ်ခန့်က လူသားမျိုးနွယ်တွေကို ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ဇွန်ဘီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မိသားစုတွေအားလုံးအပြိုပြိုအကွဲကွဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်သိပ္ပံပညာရှင်များနဲ့ သုတေသနပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီး ဆီရမ်တစ်ခုတီထွင်ကာ ဇွန်ဘီတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်သို့ပေမယ့်လည်း လောဘလူသားတွေကြောင့်ဇွန်ဘီတွေဟာ အသုံးချခံဖြစ်လာခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရကာ ဈေးကောင်းပေးဝယ်သူများလည်းများပြားလာခဲ့တယ်ဝယ်ယူသူတွေဟာ ဇွန်ဘီဖိုက်တာကလပ်ဆီလာရောက်ပြီးဇွန်ဘီအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေကာစီးပွားရှာဖွေခဲ့ကြတယ် ဇွန်ဘီဖိုက်တာကလပ်ရဲ့အတော်ဆုံးဇွန်ဘီဖြစ်သူ ဘိန်းရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာတွေ ဇွန်ဘီအချင်းချင်းအနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုလောဘသားတွေ သိသွားတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်တာမလဲ ဘိန်းလုံခြုံနိုင်ပါ့မလားဘိန်းရဲ့မူလသရုပ်အမှန်ကရော ဘာလဲဆိုတာဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်
Seolhwa 2019 ဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေများလာရင်ထွက်ပေါက်ရှာတတ်ကြတာမျိုးလူတိုင်းကြုံဖူးကြမှာပါ။ဒီကားက Psychopath ကားဖြစ်သလို တွေးပြီးတစ်စိမ့်စိမ့်ခံစားရတဲ့ကားမျိုးပါ။ ဆောဟွာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်။လှတယ် ငယ်တယ် ချောတယ်။သူဘဝမှာငယ်ငယ်တည်းကအမေကအိမ်ကထွက်သွားတယ်။အဖေကအလုပ်မှာမတော်တဆမှုကြောင့်လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းအမြဲစိတ်ဓါတ်ကျရန်လိုနေခဲ့တယ်။မခံနိုင်တော့ဆောဟွာတစ်ယောက်အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီးအသိဦးလေးကြီးအိမ်မှာသွားနေတယ်။ပိုက်ဆံရှာဖို့ ဘားမှာအလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့သူ့ဆီကိုအကြံအဖန်လုပ်မယ့်ယောကျာ်းတစ်ယောက်တည့်တည့်ကြီးရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုအကြံအဖန်လုပ်ပြီးသူဘဝကိုဖျက်ဆီးမယ့်ဆောဟွာတစ်ယောက်လက်က လွတ်အောင်သူမဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ။သူအဖေလက်ကကော သူမ လွတ်အောင်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့လား။သူအမေကကော ဘယ်မှာလဲ။အတူတူနေတဲ့ဦးလေးကြီးနဲ့ဆက်ဆံရေး၊ဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အမုန်းနဲ့နာကျင်မှုတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ကားဆိုလည်းမမှားပါဖူး။အားလုံးပဲခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအုန်း။
ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းတစ်ယောက်.. ချို့တဲ့ပြီး အရာရာအဆင်မပြေတဲ့မိသားစုကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူ.. တစ်နေ့ဆိုင်ပိတ်ချိန် လော်ကာတွေကို ဧည့်သည်ပစ္စည်းကျန်မကျန်စစ်တော့ အိပ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ ငွေထုပ်ကြီးသွားတွေ့တယ်… သိမ်းထားပေးပေမဲ့ ငွေထုပ်ကိုလာစုံစမ်းတဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်… သူဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ…. တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ သူ့ချစ်သူ အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့ ငွေတွေလူဆိုးအဖွဲ့ဆီကနေချေးရင် ထွက်ပြေးသွားတယ်.. ဒီအရာရှိဟာ လည်ပင်းနစ်နေတဲ့အကြွေးတွေနဲ့ ပြန်မဆပ်နိုင်ရင် သူ့ကလီဇာတွေထုပ်ပြီး အစိမ်းစားဖို့ဝန်မလေးတဲ့ လူဆိုးအဖွဲ့နဲ့ ဇောချွေးပြန်နေတယ်…သူတို့ဘယ်လိုဆက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုတာ ခံစားကြည့်ကြပါ… Money Is The Second God ..ဆိုတာမျိုးက တစ်ချို့ယုံကြည်ကြတယ်…. ယုံရလောက်အောင်လည်း ငွေရှိရင် အတော်များများ အဆင်ပြေနေတာကိုး….. ဒါ့ကြောင့် ငွေနောက်ကို လိုက်ရင်း အလိုက်မတတ်တော့ ကိုယ်က သားကောင်ပြန်ဖြစ်သွားကြတဲ့ သူတွေဒုနဲ့ဒေး….. ဒီကားက နည်းနည်းတော့ သွေးပျက်ချင်စရာကောင်းတယ်… အဓိကမင်းသားကတော့ The King ,Steel Rain,The Divine Move,Cold Eyes တို့နဲ့မြန်မာပရိတ်သတ်တွေလူသိများတဲ့ ကိုရီးယားရဲ့အထင်ကရမင်းသား Woo-sung Jung သရုပ်ဆောင်ထားတယ်
Lady Driver (2020) =========================== မေလနှစ်ရက်‌နေ့ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ဇာတ်ကားအသစ်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖြစ်တဲ့ အယ်လီလန်းဆင်း ကားမောင်းလိုင်စင်ဖြေဖို့အတွက် အမြဲတမ်းအစီစဉ်တွေချထားပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ ဂျက်စ်ကတော့မဖြေဖြစ်အောင် ဟန့်တားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ကျောင်းကကားကိုဌားပြီး လိုင်စင်ရအောင်ဖြေခဲ့ပါတယ်၊ လိုင်စင်ရတဲ့နေ့မှာပဲ သူများကားကိုတိုက်မိပြီး လျော်လိုက်ရတာကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူနဲ့စကားများကြပါတယ်။ စကားများပြီး အယ်လီဟာအဖေဖြစ်သူရဲ့ အမျိုးတွေကိုရှာမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ဂျက်စ်က နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ပါ အယ်လီကအရင်အိမ်ထောင်နဲ့ ရထားတဲ့ကလေးပါ။ အရင်ခင်ပွန်းသည်ဟာ ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ရင်း မတော်တဆဖြစ်ပြီးဆုံးပါသွားခဲ့တာပါ။ တဖြည်းဖြည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့အယ်လီဟာ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့စရိုက်ချင်းတူလာခဲ့ပြီး ကားတွေနဲ့ပက်သက်ရင်ထူးချွန်တဲ့သူပါ၊ ဒါ့ကြောင့်လည် းဂျက်စ်ဟာအယ်လီသူ့အဖေရဲ့ ခြေရာနင်းမှာကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗီဇဆိုတာဟာ ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက် အယ်လီဟာ သူ့အဖေရဲ့သွေးအပြည့်ပါလာတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အိမ်ကထွက်သွားပြီး သူ့အဖေရဲ့ညီဖြစ်သူဆီမှာနေရင်း ပြိုင်ကားမောင်းတာတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်လာပါတော့တယ်၊ ဦးလေးဖြစ်သူက အယ်လီမှာပါရမီရှိမှန်းသိသော်လည်း အမေဖြစ်သူဂျက်စ်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကို နားလည်တဲ့အတွက် ပြိုင်ပွဲတွေ၀င်ပြိုင်ဖို့ကိုတော့ တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော်လည်းအယ်လီရဲ့ဗီဇအရ ထိန်းချုပ်လို့မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့အမေကို သူပြိုင်ကားမောင်းခွင့်ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုစည်းရုံးမလဲ၊ ပြိုင်ပွဲတွေမှာရော အနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ အသက် 16 နှစ်သာရှိသေးပြီး ပါရမီရှိပေမဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ သူမ ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီး အောင်ပွဲတွေရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို Lady Driver ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှ ာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Trance (2020)===========IMDb Rating – 7.3/10#Unicodeဒီဇာတ်လမ်းအကျဉ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့.. စိတ်နောက်နေတဲ့ညီဖြစ်သူ သတ်သေသွားတဲ့နောက်မှာ Motivational Speaker ဗီဂျူးပရာဆပ်တစ်နောက်ဇာတိမြို့ငယ်လေးကနေ မွမ်ဘိုင်းကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် …. သူများတကာတွေကိုသာ အောင်မြင်ရေးရဲ့သော့ချက်ဆိုပြီး ဟောပြောနေပေမယ့် တကယ်တမ်း သူ့ဘဝက သုညသာသာ စုတ်ပြတ်နုံချာလွန်းလှပါတယ်။သူ့ရဲ့ အိပ်မက်က တစ်နေ့ကျရင် ခန်းမကျယ်ကြီးတစ်ခုမှာ လူတစ်သောင်းကျော် သူဟောပြောတာတွေကိုလာနားထောင်ဖို့ပါပဲ။ အဆက်အသွယ်တစ်ခုနဲ့ ထရိုင်ပတ်လုပ်ငန်းစုမှာ အလုပ်သွားလျှောက်ရင်း သူ့ကိုသမာရိုးကျမဟုတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါက ဘာအလုပ်လဲဆိုတာရယ် သူ့ဘဝ ဘယ်လိုတစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။IMDB 7.3/10 တောင်ရရှိထားပြီးတော့ လူတွေရဲ့ အားကိုးရာရှာတတ်တဲ့သဘောထားတွေ ဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ အမြတ်ထုတ်မှုတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ May Myat Thu ပဲဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ကိုရီးယားကျောင်းသားတော်လှန်ရေးဇာတ်လမ်းလေးကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Action ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့အမိုက်စား ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ကျောင်းသားသစ်ချွဲဂန်းအီကို အားလုံးကဝိုင်းပြီးဆန့်ကျင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ချွဲဂန်းအီရဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားများကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကျောင်းသားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ပြီး ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူအနိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါ။ချွဲဂန်းအီရဲ့အတိုက်အခိုက်ကျွမ်းကျင်မှုကို ရင်သပ်ရှုမောခံစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းရသကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ညွှန်းချင်ပါတယ်..
The Lovebirds (2020) ================================== အခုတစ်ခါမှာတော့ Netflix ကနေ ထွက်ရှိထားတဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အချစ်ငှက်ကလေးတွေ ချစ်ကြည်နူးပြီး တစ်တီတူးကြတာ ထုံးစံပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့လည်း သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ အချစ်တွေလျှံလာပြီး ကတောက်ကစလေးတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲက ဂျီဘရန်နဲ့ လီလာနီဟာလည်း ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ စကားများရန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုနဲ့ လမ်းခွဲကြပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်နေ့မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီရာဇဝတ်မှုကြီးကနေ လွတ်မြောက်အောင်သူတို့နှစ်ယောက် စွန့်စားခန်းဝင်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ သူတို့ဒီရာဇဝတ်မှုကြီးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား ??? သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်သက်မှုကရော ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဟာသလေးတွေနဲ့ ရိုဆန်ဆန်ကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် …
What are the Odds (2020)
Becky (2020) =========================== ဆယ်ကျော်သက်‌ကောင်မလေးတစ်ယောက် ထောင်ထွက်ဖိုက်တာတွေကို ပြန်ကင်တဲ့အကြောင်းကို Thriller ဆန်ဆန်လေး ရိုက်ပြထားတာပါ။ ဘက်ကီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ အမေသေပီးတော့ စိတ်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူနဲ့သူ့အဖေတို့ ကျောင်းအားလပ်ရက်မှာ တောထဲက အိမ်လေးကိုသွားအပန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာ သူ့အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့ သူမဟာ အိမ်မကြီးရဲ့ နောက်ဖက်က အိမ်လေးထဲမှာ စိတ်ဆိုးပြီး သွားနေနေတုန်း အပန်းဖြေအိမ်ကို ထောင်ထွက်တွေ ဝင်စီးတာ ခံလိုက်ရပါတယ်။ သူ့အဖေရယ် သူ့မိထွေးဖြစ်လာမယ့် သူရယ် သူ့ရဲ့ မိထွေးကနေပါလာမယ့် သားလေး ရယ်ဟာ အိမ်ကြီးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အတွက် ထောင်ထွက်တွေရဲ့ ဓါးစာခံတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ထောင်ထွက်က အဲ့အိမ်ဝန်းကျင်မှာ ဖွက်ထားတဲ့ သော့တစ်ချောင်းကိုလိုချငနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘက်ကီ့ဆီမှာ အဲ့သောလေးရောက်နေတဲ့အခါ လူဆိုးတွေ ဘက်ကီဆီက သော့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ တောင်းလို့ရခဲ့လား ၊ မထင်မှတ်တာတွေဖြစ်သွားပြီး ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ထောင်ထွက် လူမိုက်တွေနဲ့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ အသည်းတယားယား ကြည့်ရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးကြပါဦးလို့ ….
100% Wolf (2020)===============IMDb Rating 6.0/10#UnicodeAnimation ဇာတ်ကားသစ်လေးပါ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဝံပုလွေမျိုးနွယ် ခေါင်းဆောင်လောင်းလျာလေးဖြစ်တဲ့ ဖရက်ဒီလူပင်ပါ။ သူက အင်အားကြီးတဲ့ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ဖြစ်လာရမယ်ဆိုပေမဲ့ သူတကယ်တန်းအသွင်ပြောင်းတော့ ပူဒယ်ခွေးလေးတစ်ကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ခွေးတွေကို မုန်းတဲ့ ဝံပုလွေအုပ်ကို ခေါင်းဆောင်ရမယ့်သူက ပူဒယ်လေး တစ်ကောင်ဖြစ်နေတော့ သူခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်ပါမလား။ အခက်အခဲတွေကြားကနေ ခေါင်းဆောင်ဝံပုလွေဖြစ်ဖို့ ထိုက်တန်ကြောင်းကို သူဘယ်လိုတွေသက်သေပြမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Animation ကားလေးပါ။
လျှောက်သွားနေတဲ့ သူတိုင်းက လမ်းပျောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လျှောက်သွားနေတဲ့သူ တော်တော်များများကတော့ လမ်းပျောက်နေကြပါတယ် တဲ့။ ဒီစာသားလေးက DC Showcase တွေထဲက The Phantom Stranger ရဲ့ အကြောင်းကို ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးရဲ့ အစမှာပါလာတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးထဲမှာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရင်းလမ်းပျောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် Sebastian ဆိုတဲ့ ဝိညာဉ်တွေကို စုပ်ယူစားသောက်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင်ဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ လမ်းမှားကို ရွေးမိတဲ့ သူ့ကို Phantom Stranger က လမ်းမှန်ကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားဆိုတာ လမ်းရဲ့အဆုံးမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းကိုလျှောက်နေတဲ့သူရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိနေတာပါလို့ ပြောသွားပါတယ်။ Dialogue တွေကတော့ ကြွေချင်စရာတွေပါပဲဗျာ။မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Immortal တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Phantom Stranger အကြောင်းတစ်ချက်လောက် ရှိုးလိုက်ကြပါဦး။
Netflix ကနေ ဒီနေ့ပဲထွက်လာတဲ့ Project Power ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ Project Power ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက တွေးထားသလိုမျိုး ဘာဆေးသောက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုး ဘာအရောင်လေးသောက်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေ မှတ်မိကြလား။ ဒီကားကလဲ ဒီသဘောပါပဲ Power ဆိုတဲ့ ဆေးလုံးပေါ့။ ဒီဆေးလုံးကတော့ အရောင်တွေ ဘာညာမရှိဘူး တစ်မျိုးထဲပဲ။ ဘာအစွမ်းရမယ်ဆိုတာလဲ မသိဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် သေပါသေနိုင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစမှာတော့ ဒီ Power ဆိုတဲ့ ဆေးကိုရောင်းတာနဲ့ အစပြုထားပါတယ်။ Power ကိုရောင်းပြီးတော့ ငွေရှာကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီလိုဆေးမျိုးဆိုတာ လူတိုင်းသောက်ချင်ကြတယ်လေ။ အထူးသဖြင့်တော့ လူငယ်တွေ လမ်းပေါ်ကလူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရသွားနိုင်တယ်လေ။ ဆိုးတာကတော့ စျေးများတာပါပဲ။ စျေးများတယ်ဆိုတာကလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဂိုဏ်းအဖွဲ့တွေကို ဦးတည်ဖို့ပါ။ အဲ့ဒီကနေမှ အစိုးရကို ဖြုတ်ချမယ်ပေါ့ဗျာ။
Power ကိုရောင်းတဲ့ Robin ဆိုတဲ့ ကလေးမတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါကတော့ Frank လို့ခေါ်တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။ ရဲဝန်ထမ်းနဲ့ ဒီလိုဆေးရောင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့က ဘယ်လိုဘော်ဒါဖြစ်လဲပေါ့။ တကယ်တော့ Frank က ဆေးသုံးတဲ့ လူဆိုးတွေကို ပြန်ချဖို့အတွက် Robin ဆီကနေ ဆေးတွေဝယ်တဲ့ရဲပါ။ ဆေးသုံးပေမဲ့လဲ ကောင်းတဲ့ရဲပေါ့။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Art ပါ။ သူကတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိရသေးပဲ ဒီဆေးတွေဘယ်ကနေထွက်လဲဆိုတာကိုတစ်ကိုယ်တော်ရှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
Art နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တာကတော့ 2004 ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်လူမဲအဆိုတော် Ray Charles ရဲ့ Biography ရုပ်ရှင် Ray ဇာတ်ကားနဲ့ Oscar ရထားတဲ့ Jamie Foxx ပါ။ Django Unchained Just Mercy နဲ့ Baby Driver တို့အပါအဝင် The Amazing Spider-Man2မှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Frank ပါ။ သူကတော့ 500 Days of Summer လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ တန်းသိကြလောက်တဲ့ Joseph Gordon-Levitt ပါ။ အခုကတော့ Summer ကိုကြိုက်တာတွေ မကြိုက်တာတွေတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ Fixies Bike စီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Premium Rush ဆိုတဲ့ ကားလေးကို သွားကြည့်ဖို့ညွှန်းချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Robin အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ Dominique Fishback ပါ။ Dominique ကတော့ The Deuce Series နဲ့ Night Comes On The Hate U Give တို့မှာလဲ သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
မနေ့မှ Concert for Aliens music video ထွက်ထားတဲ့ အဆိုတော် MGK လဲ Newt ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာမှာပါဝင်ထားပါတယ်။
ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကလဲ ပရိသတ်တွေဦးဦးဖျားဖျားကြည့်ရအောင် အမြန်ဆုံးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် ကားလေးကတော့ ဒဏ္ဏာရီအကြောင်းလေးကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးနဲ့ ရိုက်ကူထားတဲ့ ကားလေးတစ်ကားပါ။
လူမသိသူမသိတောအုပ်ထဲမှာ မှော်ဝင်မြို့တစ်မြို့ရှိပါတယ်၊ ညသတ္တဝါတွေလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ ‌သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေ သမန်းဝံပုလွေတွေ မှင်စာတွေ စုန်းတွေ အစရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေနေတဲ့မြို့ပေါ့၊ အဲ့မြို့ကို ပြင်ပလူ့လောကမှာ မွေးကတည်းကကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ဗလက်ဆိုတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် လေးက သူ့အဖေနဲ့ အတူ အဲ့ဒီမှော်ဝင်မြို့ကို မြို့တော်ဝန်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ မှော်ဝင်ကျောင်းကို တက်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗလက်အဲ့မြို့ကို ရောက်လာရတဲ့တကယ့်အကြောင်းတရားတွေ ရှိပါတယ်၊ ဒါကိုဗလက်ရော သူ့အဖေရောက လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး၊ တကယ့် အဖြစ်မှန်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗလက် ရယ် သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဝုဖ် ဆိုတဲ့ သမန်းဝံပုလွေကောင်လေးရယ် ဖေလ်းဆိုတဲ့ မှင်စာမလေးရယ် သုံးယောက်အတူပေါင်းပြီး စွန့်စားခန်းတွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ ပရိတ်သတ်တို့ကြည့်ရှုရမှာပါ။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် တွေ သမန်းဝံပုလွေတွေပါတယ် ဆိုပေမယ့် ကြောက်စရာမကောင်းပဲနဲ့ ဟာသဆန်ဆန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးရိုက်ကူးထားတာပါ၊ ကလေးတွေလည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့ … ကဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဗလက်တို့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းတွေကို ရင်ဆိုင်ရမယ် သူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမယ်ဆိုတာကို သိချင်ရင်တော့ ဒီကားလေးကို down ပြီးကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်
IMDb 8.1ရရှိထားတဲ့Action Thriller ဇာတ်ကား ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဆမီရ်ချောင်ဒရီနဲ့ နာရ်ဂိရှ်ချောင်ဒရီတို့ကို မိဘာတွေက ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
နာရ်ဂိရှ် ချောင်ဒရီဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလုပ်ထွက်လိုက်ရပြီး ဆမီရ်ချောင်ဒရီကလည်းလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေပိတ်သွားတာကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံးက နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ နာရရ်ဂိရှ်ကအလုပ်အရင်ရသွားပြီး ဆမီရ်က ကျန်နေတာကြောင့် နာရ်ဂိရှ်ကိုတစ်ယောက်တည်းနိုင်ငံခြားလွှတ်ဖို့စိတ်မချပေမယ့် လွှတ်လိုက်ရပါတယ်။
တစ်ခြားတစ်နေရာကိုခေါ်သွားနေကြကြောင်း သူ့ကိုနှိပ်စက်နေကြကြောင်း နဲ့
လာပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ဆမီရ်ကိုပြောတော့ ဆမီရ်တစ်ယောက် နာရ်ဂိရှ်ဟာ အကြီးအကျယ်အန္တရယ်တောထဲ
Virgin Bhanupriya(2020)IMDB rating 6.5 ရရှိထားတဲ့ Comedy, Drama အမျိုးအစားဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်….ဘာနူးပရီယာဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာအပျိုတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူဟာအပျိုစင် ဘဝကိုဆုံးရှုံးချင်စိတ် စမ်းသပ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်….သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း ဒီဖြစ်စဉ်ကြီး အောင်မြင်စေဖို့ နင်းကန်ကူညီပါတယ်… သို့ပါသော်လည်း ပိုးသာကုန်မောင်ပုံစောင်းမတတ်ဆိုသလို လွဲပြီးရင်လွဲနေလေရဲ့… တစ်နေ့မှာအူကြောင်ကြောင်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုစာကြည့်တိုက်မှာချိန်းတွေ့ဖို့ လုပ်ရာကနေ ပြဿနာမျိုးစုံတက်ပါတော့တယ်…ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး
ကလေးကအစခွေးအဆုံးသိပြီး သမိုင်းမှာရော ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာပါ
င်သူ့ထက်တော်တယ်လို အသိမှတ်ပြုပြီးလေးစားရတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တီထွင်သူတစ်ယောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာ သူ့ကိုမသိတဲ့သူအများအပြားပါပဲ။
AC Vs DCဆိုတာ Tesla Vs Edisonပါပဲ။
ကနဦးမှာ တက်စ်လာဟာ အယ်ဒီဆင်ရဲ့အလုပ်မှာ လုပ်ခလေးနည်းနည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
သူကြံဆတဲ့ Alternating currentကို အယ်ဒီဆင်က စိတ်မဝင်စားတဲ့အပြင်
DC generation plantsတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်
လျှော်သွားတဲ့အတွက် တက်စ်လာဟာ အလုပ်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ACကုမ္ပဏီထောင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရာမှာ ACက DC (Direct Current)ထက်အကျိုးများလာတဲ့အခါ
အယ်ဒီဆင်ဘက်က AC currentကြိုးကိုဆင်မှာပတ်ပြီး
ဒါပေမယ့် နိုင်ရာဂါရာရေတံခွန်ကိုအခြေခံပြီး ACရေအားလျှပ်စစ်သုံးစက်ရုံကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး
‌ အောင်မြင်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ACကိုသုံးစွဲလာတယ်။
ထက်မြတ်တယ်၊ အကွက်မြင်တယ်၊ တီထွင်မှုတွေက
ကြိုးမဲ့စနစ်တွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ Tesla coilကိုတီထွင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ
နောက်ဆုံးလက်ကျန်နှစ်တွေဟာ ဆင်းရဲမွဲတေပြီး ရင်နာစရာတွေနဲ့ပါ။
ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့ တက်စ်လာအဖြစ် မင်းသားကြီး Ethan Hawkeက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Biological dramaဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့အခန်းတွေမှာ စိတ်ကူးယဉ်အခန်းတွေထည့်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို တက်စ်လာနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမှ ဇာတ်ကြောင်းပြောပြတဲ့အတွက်
တချို့အခန်းတွေမှာ ရုပ်ရှင်စကားနဲ့ပြောရရင် Fourth wall breakတယ်ပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားကြောင်း တက်စ်လာကိုမသိခဲ့ရင်တောင်
အရင်ကလည်း black water နာမည်နဲ့ မိကျောင်းကားတွေ ထွက်ရှိထားပါတယ်။
ဘယ်သူမှမရောက်ဖူးတဲ့ဂူတစ်ဂူထဲကို အလည်အပတ်အနေနဲ့ စွန့်စားခန်းထွက်ကြပါတယ်။
အဲဒီဂူထဲမှာ မထင်မှတ်ဘဲ ရေတွေလျှံရင်း ပိတ်မိသွားကာ
မိကျောင်းတစ်ကောင်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ survival ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။
7 လပိုင်းကမှ ထွက်ထားတဲ့ သိုင်းဇာတ်ကားအသစ်လေးပါပဲ
နတ်ဆရာထျန်းရွှမ်က သူ့တန်ခိုးစွမ်းအားနဲ့ ထိန်းချုပ်ပိတ်လှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..
God of Gamblers ( 2020 )
Game of Gambler ဆိုတဲ့နာမည်ကို မစိမ်းကြဘူးထင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် ဒီ ၂၀၂၀ မှာရိုက်ထားတဲ့ ကားကတော့ ဇာတ်အိမ် ဇာတ်ရိုးဆန်းနေမှာ သေချာပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရင်က ကြည့်နေကြ ကားတွေမှာဆို Game of Gambler ကို
လူကောင်း လူဖြောင့် လူထူးလူဆန်းအနေနဲ့ role မြှင့်ထားနေကြကနေ
ဇာတ်လမ်းလေးက ထုံးစံအတိုင်း သာမန်ကောင်လေးတစ်ယောက်က
Game of Gambler ကို ကယ်လိုက်ရာက စတာပေါ့…
မတူတာက ကောင်လေးက လောင်းကစားကို နာကျည်းနေတဲ့ နောက်ခံရှိနေတာပဲ
ဒါကြောင့် သူက ငါးဖမ်းပြီး ငါးရောင်းစားနေတဲ့ တံငှါလေးပေါ့…
ဒီလိုကောင်လေးက အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် လောင်းကစားလောကထဲ
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်တွေ့ခံစားရမယ့် ကားကောင်းလေးတစ်ခုပါလို့ ညွှန်းပေးလိုက်တယ်နော်
ဒီကားက (2017) ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Steel Rain နဲ့ အဆက်အစပ်မရှိပါဘူး…
ဇာတ်လမ်းကတော့ ပထမကားလိုပဲ နိုင်ငံရေးအခြေပြုပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာကလည်း
ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်မဖြစ်ချင်ကြပါဘူး..အဘက်ဘက်က အထိနာတဲ့အပြင်
အရာအားလုံးမူလ ပထမ အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်အတော်ယူပါတယ်…
သို့ပေမယ့်လည်း အကယ်၍များစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံစစ်ရေးအရ အရေးမနိမ့်စေဖို့ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့
တရုတ် ၊ ဂျပန် ၊မြောက်ကိုရီးယား နဲ့အမေရိကန်တို့ အဓိက ပါဝင်ကြပါတယ်..ပထမကားထက် ဇာတ်အိမ်ပိုကျယ်သလို
ရိုက်ကူးထားတာတွေကလည်း တကယ့်ကိုခမ်းနားပါတယ်…အဓိက မင်းသားကြီး Woo-sung Jung ပါတာနဲ့တင်
ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်..ဗဟုသုတများစွာရသလို တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်နဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို ရိုက်ပြပြီး
ခံရတဲ့ ဂွန်ဂျူးဟာ မိန်းကလေးဖြစ်ပေမယ့်
စာဆိုလဲ အရမ်းတော်ပေမယ့် သူ့ရဲ့တခုတည်းသော
ဒါပေမယ့်လည်း အန္ဒိယလိုနေရာမျိုးမှာ အမျိုးသမီးပိုင်းလော့က
ရှားတာကြောင့် လူအတော်များများက ဝိုင်းတားခဲ့ကြပါတယ်.
သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ပိုင်းလော့တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်
ဒါကြောင့် ဂွန်ဂျူးကလဲ ၁၁တန်းကို ဆက်တက်ပြီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်.
ထပ်သွားလျှောက်ချိန်မှာလဲ တခြား ပညာရေးအဆင့်တွေ
လိုအပ်နေသေးတာကြောင့် ဂွန်ဂျူးက နှစ်အတော်ကြာကြိုစားခဲ့ပါတယ်.
နောက်ဆုံး ပညာရေးအဆင့်တွေ မှီသွားတဲ့အချိန်မှာတော့
ပိုင်းလော့သင်တန်းစရိတ်ကြောင့် သူဟာ နှစ်များစွာကြိုးစားခဲ့သမျှကို
ဘယ်အထိ ဖိနိုပ်ခံခဲ့ရတယ် ဂွန်ဂျူးရဲ့အာဂသတ္တိကို
ထူးဆန်းတာက Rotten Tomatoes မှာ (100%) Rating